Modernized Oriental Technique of Accurate Astrology (MOTAA): January 2012
Simple and Effective, Research Based Astrology for everyone.
ငလျင်ကြီးများ နှင့် မြန်မာ နိုင်ငံ။
ဤဆောင်းပါးသည် ပြီးခဲ့သော "၂၀၁၂-နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ သုတေသန ဆောင်းပါး" တို့ နှင့် တစ်ဆက်တည်း ဖြစ်သော်လည်း- လေ့လာသူများ အတွက် ပို၍ အဆင်ပြေစေရန် သီးသန့် ခေါင်းစဉ် ခွဲထုတ် လိုက်ပါသည်။ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် မျိုးစုံကို ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသော မြန်မာ နိုင်ငံ အနေဖြင့်- လက်တွေ့ ကြုံဘူးသူတိုင်း အသည်းတုန်၊ အူတုန် ဖြစ်ခဲ့ကြရသည့် ငလျင် တို့၏ အကြောင်းကို သိထား သင့်ပါသည်။
ငလျင်တို့သည် ကမ္ဘာ အနှံ့တွင် အချိန်နှင့် အမျှ လှုပ်နေကြသော်လည်း- အင်အားနည်းပါးသော ငလျင်များ၊ လူသူ ကင်းဝေး ရာဒေသများမှ ငလျင်များကိုမူ လူသတ် ငလျင် များဟု မခေါ်တွင်ပါပေ။
အချက်တစ်ခု အနေဖြင့် သိထားကြရန်မှာ- ငလျင်၏ အင်အားကို တိုင်းတာသော ရစ်ခ်ျတာ စကေး Richter scale သည် လော်ဂရစ်သမ် တန်ဘိုး ဖြစ်သဖြင့်- အင်အား ၆- ငလျင်သည် အင်အား ၅- ငလျင်ထက်- အရွယ်အစား အားဖြင့် ၁၀ ဆ ပိုများ၍- ထွက်ရှိသော စွမ်းအင် Energy ပမာဏ အနေဖြင့် ၃၂ ဆ ပိုများခြင်း ဖြစ်သည်။ အင်အား ၆ မှ ၆.၉ အထိ ငလျင်များကို Fairly Major ခေါ် အတိုင်းအတာ တစ်ခု အနေဖြင့် ကြီးမားသော ငလျင်များ ဟု သတ်မှတ်၍ - အင်အား ၇-ထက် ပိုသော ငလျင်များကိုမူ ကြီးကျယ်သော ငလျင်များ Major Earthquake ဟု ခေါ်နိုင်ပါသည်။ အင်အား အဆင့် ၁၀ ဆိုသော ငလျင် ဆိုလျှင် Global ခေါ် တကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာ အထိ ထိခိုက် ပျက်စီးနိုင်သော - တနည်းအားဖြင့်- ကမ္ဘာ့ အပေါ်ယံ အလွှာ တစ်ခုလုံး နှင့် သက်ဆိုင်သွား ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
၁၉၆၀ တွင် လှုပ်ခဲ့သော ချီလီ ငလျင်သည် အင်အား အားဖြင့် ၉.၅ အထိ မှတ်တမ်းတွင် ပထမ စွဲခဲ့သော ငလျင် ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း- နေရာ အနေအထားကြောင့် လူသတ်အများဆုံး ငလျင် တစ်ခု မဟုတ်ခဲ့ပါချေ။
မြန်မာပြည်တွင် ပေါ်ပေါက် ဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးသော ငလျင်များကို လေ့လာကြည့်ပါစို့။
အောက် ဖေါ်ပြပါ ဇယားတွင် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး မရမီ အချိန် (တစ်နည်းအားဖြင့်- မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ဇာတာ မစတင်မီ အချိန်) ထက်ရှေ့ကျသော ငလျင်များကို မီးခိုးရောင်ဖြင့် သီးသန့် ခွဲထုတ်လိုက်ပါသည်။
၁၇၆၂-ဧပြီလ ၂-ရက် နံနက် ၅-နာရီတွင် လှုပ်ခတ်ခဲ့သော ရခိုင်ငလျင်သည် မှတ်တမ်း အရ အစောဆုံး နှင့် ပျက်စီး သေဆုံးမှု များပြားခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။
၁၈၃၉-ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၃-ရက် နံနက် ၄-နာရီ တွင် လှုပ်ခဲ့သော အင်းဝ မြေငလျင်မှာလည်း မင်းကွန်း ပုထိုးတော်ကြီး ပြိုကျ ပျက်ဆီးခြင်း၊ အောင်မြေဘုံစံ အုတ်ကျောင်းကြီး ပြိုကျပြီး သံဃာ အပါး ၂၀၀-ကျော် ပျံလွန်ခဲ့ရခြင်း၊ အင်းဝ နှင့် အမရပူရအကြား မြစ်ကမ်းတွင် ၅ ပေ မှ ၂၅ ပေ အထိ မြေအက်ကွဲ ကြောင်းကြီးများ ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည် အထိ ပြင်းထန်ကြောင်း ဆရာ ကောင်းညွန့် (ရွှေပေါ်ကျွန်း) ကလည်း သူရဇ္ဖ မဂ္ဂဇင်းတွင် ရေးသားခဲ့ပါသည်။
ထိုအထဲတွင် ၁၉၁၂-ခုနှစ်၊ မေလ တွင် လှုပ်ခဲ့သော ငလျင်သည် - ပြင်ဦးလွင် မြို့အနီးတွင် ဗဟိုပြုပြီး အင်အား အဆင့် ၈- အထိ ရှိသော ငလျင်ဖြစ်သည် ဟု ဆရာ မင်းရှိန်အောင်က သူရဇ္ဇ မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖေါ်ပြခဲ့ပါသည်။ U.S.G.S မှတ်တမ်းများတွင်မူ အင်အား အသေးစိတ် ဖေါ်ပြထားခြင်း ကို ရှာမတွေ့ပါ။
၁၉၁၇- တွင် လှုပ်ခတ်ခဲ့သော ပဲခူး ငလျင် ရွှေမော်ဓော စေတီ ငှက်ပျောဖူး မှ စ၍ ခေါင်းလောင်ပုံ အထိ ပြိုကျ ပျက်စီး ခဲ့ပြီး- အင်အာ ၈-မှ ၉ အဆင့် ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ၄င်းကိုလည်း U.S.G.S မှတ်တမ်းများတွင် အသေးစိတ် မတွေ့ရပါ။ အများစု သိထားသော ပဲခူးငလျင်သည် ရစ်ခ်ျတာ စကေး ၇.၃ ရှိပြီး- လူ ၅၀၀ ကျော်သေဆုံး ခဲ့သော ရွှေမော်ဓော မှတ်တမ်းတွင် အမှတ်စဉ် ၃၂-ခု မြောက် ငလျင် ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တွင်လည်း ထိုငလျင်ကြောင့် ရွှေတိဂုံ စေတီ စိန်ဖူးတော် ပြုတ်ကျပြီး ထီးတော် အထက်ပိုင်း ပျက်စီးခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။
၁၉၃၀-ဒီဇင်ဘာတွင် လှုပ်ခဲ့သော ငလျင်ကိုမှု ဖြူးငလျင်ဟု အသိများကြပြီး၊ အင်အား ၇.၃ ရှိခဲ့ပြန်ပါသည်။ ခရစ်ယာန် သာသနာပြု ကျောင်း ပြိုကျပြီး- လူ ၃၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ရသည်ဟု မှတ်တမ်း ရှိပါသည်။
၄င်းတို့သည် မြန်မာ နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး မရခင်က အဓိက ကျသော ငလျင်ကြီးများ ဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။
မြန်မာ နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက် ငလျင်များမှာမူ- အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
ငလျင် မိုးတိမ် နှင့် ကမ္ဘာ့ ငလျင် အချို့။
ငလျင် ကို တွက်ချက်သော နက္ခတ် ပညာပိုင်း သည် အလွန်မြင့်မားသော ပညာပိုင်း ဖြစ်သဖြင့်- အများစု အနေဖြင့် အသာထား- နက္ခတ် ပညာရှင် များစွာ အနေဖြင့်ပင် လေ့လာရန် မလွယ်ပါချေ။ ထူးခြား နက်နဲသော ကုရုမ စက္က စသော ဇာတာခွင်များပါ တွက်ချက် ရမည့် အပြင်- နေရာ ဒေသ လတ္တီတွဒ်၊ လောင်ဂျီတွဒ် စသည် တို့ပါဝင်သော မြေပုံ နှင့်ပါ ယှဉ်တွဲ တွက်ချက် ရသောကြောင့်- အဆင့်မြင့် သုတေသီ များ အတွက်သာ ဖြစ်ပါ၏။
သို့သော် နက္ခတ်ပညာ မသိနားမလည်သော်လည်း - ကြိုတင် ခန့်မှန်း နိုင်သော နည်းများစွာတွင်- ငလျင် မိုးတိမ်သည် လွယ်ကူသော အနေအထားတွင် ရှိပါ၏။
၀ါရဟ မိဟိရ ဆရာသခင်၏ ဗြို့ဟဇ် သံဟိတ ကျမ်း အခန်း ၃၂-တွင်- ကောင်းကင်မှ မိုးတိမ်တို့ကို လေ့လာ၍ ငလျင် ခန့်မှန်းနိုင်ခြင်းများ ကို ညွှန်ကြား သင်ပြ ပေးခဲ့၏။
ရှေးခေတ် မြန်မာ ပညာရှင်ကြီးများကလည်း- ကောင်းကင်ပေါ်တွင် ပန်းဖွားပုံ၊ လှည်းပန်းတောင်းပုံ၊ မြွေနဂါးပုံ၊ ဖဲပြားပုံ၊ ကြိုးတန်းပုံ တိမ်တိုက်များ ထင်ရှားစွာ ပေါ်နေလျှင် မြေငလျင်များ ကြီးစွာ လှုပ်ရှားသော နိမိတ် ဖြစ်သည် ဟု ဆိုရိုးထားခဲ့ကြ၏။
ယခု မျက်မှောက်ခေတ် ကာလတွင် ကောင်းကင် မိုးတိမ်တို့ ထူးခြားမှု နှင့် လက်တွေ့ ငလျင်ကြီး ဖြစ်ပျက်မှုကို အောက်ပါ ဖြစ်ရပ်များမှ လက်တွေ့ သိရှိခဲ့ကြရ၏။
တရုပ် နိုင်ငံ သမိုင်းမှတ်တမ်း များအရ- ရှေးခေတ် လုံတဲ တိုင်းပြည် (ယခု အခါ နင်ရှာပြည်နယ် ဒေသ- တရုပ်ပြည် အနောက်မြောက်ဘက်ပိုင်း- အရှေ့ လောင်ဂျီတွဒ် ၁၀၆း၆ နှင့် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၃၅း ၄၂ ဒေသ တွင်- လွန်ခဲ့သော အနှစ် ၃၀၀ ကျော် ကာလ က မှတ်တမ်း ရေးခဲ့သည်မှာ-
“နေသာ၍ နွေးထွေးသော ကောင်းကင်ပြာ နှင့် ကြည်လင်သော နေ့တစ်နေ့ ဖြစ်၏။ အနက်ရောင် တိမ် အမျှင် များသည် ကောင်းကင်ပြင်အား အလွန်ကြီးမားသော မြွေကြီး တစ်ကောင် ဖြန့်ကျက်လိုက်သည့် အလား ရုတ်တစ်ရက်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ထိုတိမ်တို့သည် တော်တော်ကြာကြာ တည်ရှိနေခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ ငလျင်ကြီး ဖြစ်ပေါ် လာတော့၏။”
ဟူ၍ ဖြစ်၏။ ထိုနေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ငလျင်သည် ကမ္ဘာ့ မှတ်တမ်းများ အရ- ၁၆၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၅-ရက် “နင်ရှာ ငလျင်” ဟု သမိုင်းတွင် စေသော- ပြင်းအား ၇-အဆင့် ငလျင် ဖြစ်ခဲ့၏။
ရှေးဟောင်း ငလျင် မိုးတိမ် ပညာကို သိရှိခွင့်ရခဲ့သော ဂျပန် နှင့် တရုပ် နိုင်ငံတို့သည် - တန်ဘိုး လေ့လာခဲ့ကြရာတွင်- ၁၉၇၈-ခုနှစ် မတ်လ ၆- ရက်နေ့ နံနက် ပိုင်းတွင်- နာရာ မြို့တော်ဝန်ဟောင်း ဖြစ်သူ ကာဂီဒါ သည် မတ်လ ၇-ရက်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အင်အား ၇.၈ ရှိသော ကန်တို Kantow earthquake ငလျင် အား မှန်ကန် တိကျစွာ ခန့်မှန်း ဟောချက်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ မြို့တော်ဝန်ဟောင်း ကာကီဒါ က ပြောခဲ့သည်မှာ- ငလျင်၏ ဗဟိုချက် epicenter သည် ထိုမိုးတိမ်များ၏ အလယ် တည့်တည့် နေရာ နှင့် ထောင့်မှန်ကျသော နေရာ ဖြစ်လိမ့်မည် ဆိုခဲ့သော်လည်း- ထိုအချက်ကတော့ မမှန်ကန်ခဲ့ပါပေ။ သို့သော် လည်း- ထိုပညာ ရပ်ကို ၁၉၈၅ နောက်ပိုင်းတွင် လေ့လာ လိုက်စားသူများ နည်းပါးသွားသဖြင့် ပြန်လည် တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပြန်၏။
တရုပ် လူမျိုးဖြစ်သူ ကျောက်ဟောင်ရှူသည် - ၁၉၉၀ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၀-ရက်တွင်- မြွေသဖွယ် ရှည်လျားသော တိမ်များသည် အမြီးဖျား အနေဖြင့် အနောက်မြောက်ဘက်သို့ လှည့်နေသည်ကို သတိပြု လေ့လာခဲ့မိရာမှ- ၁၈- နာရီ အကြာတွင် အီရန် နိုင်ငံ တီဟီရန် တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကမ္ဘာကျော် Manjil-Rudbar ငလျင်ကြီးကို ကြိုတင် ခန့်မှန်း နိုင်ခဲ့၏။ (မှတ်ချက်- ငလျင်ဖြစ်ရာ ဒေသသည် - တိမ်၏ အမြီးညွှန်ရာ အနောက်မြောက် ဖြစ်နေသည်ကို သတိပြုပါ။)
၁၉၉၈-ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၄-ရက် တွင် အာဖဂန် နစ္စတန် ဒေသတွင် အင်အား ၆.၁ ရှိသော လူပေါင်း ၄၀၀၀ မျှ အသက်ဆုံးခဲ့သည့် ငလျင်ကြီး ဖြစ်စဉ်က- ကောင်းကင်တွင် မီးပုံးအိမ် တစ်ခု အသွင်ရှိသော တိမ်ကို မြင်ခဲ့ကြရ၏။
ထိုနည်းတူ မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်သော ဖြစ်ရပ် အချို့တွင်လည်း ကောင်းကင်မိုးတိမ်များ ထူးခြား ဆက်စပ်နေမှုများ တွေ့ကြရ၏။
ထိုနည်းတူ ၂၀၀၈-ခုနှစ်၊ မေလ ၁၂-ရက်တွင် - တရုတ်ပြည် - စီချွမ် ဒေသတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၅၈- အတွင်း အပြင်းဆုံး ငလျင်ကြီး ဖြစ်ပြီး- လူပေါင်း ၆-သောင်း၊ ၈-ထောင် ၏ အသက်ကို နှုတ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီး၊ လူဦးရေ ၄.၈ သန်းကို အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဖြစ်စေသော ငလျင်ကြီး ပေါ်ပေါက်ခဲ့စဉ်ကလည်း- ထူးခြားသော တိမ် အနေအထားကို အောက်ပါ ပုံတွင် တွေ့ရှိရပါသည်။
အောက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်မှာ ဂျပန် တို့ အနေဖြင့် လက်ခံထားသော ငလျင် မိုးတိမ်နှင့် ကောင်းကင် မြူ fogs အနေအထားများ ဖြစ်၏။ ဂျပန်တို့ တွင် ငလျင် နှင့် ပတ်သက်သော အောက်ပါ ဆိုရိုးများလည်း ရှိသေး၏။
အကယ်၍ တိမ်တို့သည် မြေပြင်နှင့် နီးစပ်ခဲ့သော်- မိုးရွာမည်။ သို့မဟုတ် ငလျင်လှုပ်မည်။
အကယ်၍ တိမ်တို့သည် အရှေ့ဘက်ဆီသို့ ရွေ့လျားနေ လျှင် (သို့မဟုတ်) အနက်ရောက် အစင်းကြောင်းများ နှင့် နဂါး ပုံသဏ္ဍာန် ရှိသော တိမ်များသည် အလျားလိုက် လွင့်မျောနေလျှင် ငလျင်လှုပ်မည်။
Mackerel ငါးကဲ့သို့ ပုံသဏ္ဍာန် ရှိသော ကောင်းကင်ပြင်သည် ငလျင်၏ ကနဦး ဖြစ်သည်။
သာယာသော မြူနှင်းတို့ သည် တောင်အား အုပ်ဆိုင်း နေခြင်းသည် ငလျင်၏ နိမိတ် သင်္ကေတ ဖြစ်သည်။
တိမ်များ ရွေ့လျားမှု ရုတ်တစ်ရက် ရပ်တန့်သွားပြီး၊ လေတိုက်ခြင်းလည်း မရှိ၊ မြင်ကွင်းသည် မှုန်ဝါး သွားပြီး မြေကြီးတွင်းမှ အသံကြားရလျှင် (မြန်မာ တို့ က တော်လဲသံဟု ခေါ်ပါသည်။) ငလျင် လှုပ်တော့မည် ဖြစ်သည်။
တိမ်တို့သည် မြွေ (သို့မဟုတ်) နဂါး အသွင်ဖြင့် နံနက်ဦး နေကို ၀န်းရံ နေပါက ငလျင် လှုပ်မည် ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ဤဆောင်းပါး ဖတ်သူသည် ထူးခြားသော မိုးတိမ် အနေအထားကို သတိပြုမိပြီး- ဓါတ်ပုံတင် အသိပေး နိုင်ခဲ့သော်- မိသားစု နှင့် အချို့သော အွန်လိုင်း သူငယ်ချင်း အချို့ကို ကယ်တင်ရာ နိုင်ကောင်း ကယ်တင် နိုင်မည် ဟု ထင်ပါသည်။
နောက်ဆောင်းပါးတွင် မြန်မာ ငလျင်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဇာတာ ၂-စောင်ကို ဆက်စပ် ယှဉ်တွဲ ဖေါ်ပြပေးပါမည်။
လူအများ အကျိုး အတွက် ကူညီ ထောက်ပံ့နိုင်သော မြန်မာ နက္ခတ်ဗေဒင် သုတေသီများ ထွန်းကား နိုင်ပါစေ။
Labels: ငလျင်၊ Mundane၊ မိုးတား နက္ခတ်
၂၀၁၂-နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ သုတေသန။ အပိုင်း (၃) တိုင်းပြည်က နုနု၊ မုန်တိုင်းက ထန်ထန်။
လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့သည်မှ ၆၄-နှစ်ကြာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည့် မြန်မာပြည် သည် - ဘ၀ လမ်းကြောင်း တစ်လျှောက်တွင် - အနိမ့်အကျ ဘ၀ မုန်တိုင်းမျိုးစုံကို- အနာတရ များစွာဖြင့် ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရ၏။
ထိုအထဲတွင် ထင်ရှားသည် တို့မှာ အရေးအခင်း အထိကရုဏ်းများ ဖြစ်၏။ စာဖတ်သူတို့ အနေဖြင့်- အရေးအခင်း အထိကရုဏ်း ဖြစ်ပွားလျှင်- မည်သည့် ကဏ္ဍများ ထိခိုက်သည် ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ကြဘူးပြီး ဖြစ်၏။
နိုင်ငံ အုပ်ချုပ်သူ။ မင်းအစိုးများ၊ တရားရေး အုပ်ချုပ်မှု အာဏာ (တစ်နည်းအားဖြင့် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်)
ဖြစ်ပွားသော အရေးအခင်း တို့သည်- ကျောင်းသားများ နှင့် သက်ဆိုင်ပါက- (တစ်နည်းအားဖြင့် ဗုဒ္ဓဟူး ဂြိုဟ် နှင့် ကြာသပတေးဂြိုဟ်)
တိုင်းပြည်၏ တည်ညိမ်အေးချမ်းမှု။ ပြည်တွင်းရေး အနေအထား။ (တစ်နည်းအားဖြင့်- ၄-တန့်ဘာဝ)
တိုင်းပြည်၏ ယေဘူယျ အနေအထား (တစ်နည်းအားဖြင့် - ၁-တန့်ဘာဝ)
ပြည်ပ ဆက်ဆံရေး အနေအထားများ။ (တစ်နည်းအားဖြင့် - ၇-တန့်ဘာဝ)
ဆူပူ အထိကရုဏ်း ဖြစ်ပွားမှုများ၊ ထိခိုက် နှိမ်နင်းမှုများ။ (တစ်နည်းအားဖြင့် - ၆-တန့်ဘာဝ)
ထို့အပြင် ကြီးကျယ်သော ဖြစ်ပွားမှု ဖြစ်ပါက- သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများစွာ တို့အား ဂြိုဟ်ဆိုးတို့၏ လွှမ်းမိုး ဖျက်ဆီးထားမှုတို့ များစွာ တစ်ပြိုင်နက် တည်ရှိ နေရမည် ဆိုသော အချက်ကိုလည်း မမေ့သင့်ပါပေ။
ဖြစ်ပွားသော အချိန်ကာလ တို့သည်- ဂြိုဟ်ဆိုးများ၏ ဒဿတွင်လည်းကောင်း၊ အင်အား နည်းပါးသော ဂြိုဟ်တို့၏ ဒဿာ များတွင်လည်းကောင်း ဖြစ်ပွားနိုင်သည် ကိုလည်း နက္ခတ် ပညာရှင်များ အနေနှင့် သိထားကြသည်ဖြစ်၏။အောက်ပါ ဖြစ်ရပ် တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းတွင် အထင်ရှားဆုံး ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ခဲ့၏။ ဇာတာဖြင့် တွက်ချက် ရက်စွဲကို ယူရာတွင်- ဖြစ်ပွားနေသော ရက်များအတွင်း အထင်ရှားဆုံး- ဟု ဆိုရမည့် ရက်များကို အသုံးပြု၏။
အလံတင် အလံချ အခမ်းအနား ဇာတာ- နံနက် ၄း၂၀ အရေးအခင်းများ ကို စစ်ဆေးခြင်း။
ဤဇာတာ အရ- စနေဂြိုဟ်သည် အရေးအခင်း ကာလများ အတွင်း - ကောဇာ ဂြိုဟ်ဆိုးများ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို အကြိမ် အရေအတွက် အများဆုံး ခံထားရသော ဂြိုဟ် ဖြစ်၏။ တစ်ဆက်တည်း- ၄င်းသည်- ၄-တန့် ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ သခင်လည်း ဖြစ်၏။ စနေ ၏ သဘာဝ ပရိယာယ် နှင့် ၄-တန့် သခင် အဖြစ် တာဝန် ယူထားရသော ကာရက အဓိပ္ပါယ်ကို ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။ စနေသည်- “နိုင်ငံတော် အောက်ခြေ၀န်ထမ်းများ၊ ဆင်းရဲသူ လူတန်းစားများ၊ အောက်ခြေ လုပ်ငန်းများ နှင့် သတ္တုတွင်း တူးဖေါ်ရေးများ၊ ဥပဒေ ထိမ်းသိမ်းရေး ဆောင်ရွက်ရသူများ၊ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်သူများ၊ အများပြည်သူပိုင် အဆောက်အဦများ၊ ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်များ။” ကို တာဝန်ယူ၍- ၄-တန့် သခင် အဖြစ်ဖြင့်- “စာသင်ကျောင်း၊ စသည့် ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတော် မြေယာ ကဏ္ဍ၊ ကုန်သွယ်ရေး နှင့် စိုက်ပျိုးရေး။ လူထု အုပ်စု၊ သဘာဝ သယံဇာတ၊ သတ္တုတွင်း၊ ငြိမ်းချမ်း သာယာ အေးချမ်းမှု၊ နိုင်ငံရေး တည်ညိမ်မှု။” ကို တာဝန်ယူ၏။
ဆင်းရဲသား ပြည်သူများ နှင့်- နိုင်ငံတော် အေးချမ်းမှုများကို ထိခိုက်ကြောင်း ပြဆိုနေမှုကို တွေ့မြင်ရ၏။ ယခု ဆက်လက်၍- ထိုကာလများ အတွင်း မူလ ဇာတာ၏ ဘာဝများ အပေါ်တွင် ကောဇာ ဂြိုဟ်ဆိုးများ၏ ဖျက်ဆီးထားခဲ့မှုများကို လေ့လာကြပါအံ့။
အောက်ဖေါ်ပြပါ ဂရပ် အနေအထားအရ- ထိုအရေးအခင်းများ ဖြစ်ပွားမှုများ အတွင်း အများဆုံး ထိခိုက် ဖျက်ဆီးခြင်း ခံရသော ဘာဝများမှာ- ၅-တန့်၊ ၆-တန့် နှင့် ၁၂-တန့် တို့ဖြစ်ကြ၏။
တစ်ဆက်တည်း ဒဿာ အနေအထားများကိုပါ လေ့လာကြပါအံ့။
အရေးအခင်း ဖြစ်ပွားသော ကာလများကို ဒဿာ စနစ်ဖြင့် လေ့လာလိုက်သော အခါ- ကြာသပတေး ထူလ ဒဿာ နှင့် စနေ အန္တရ ဒဿာ သည် အထင်ရှားဆုံး ဖြစ်၏။ ကြာသပတေးသည် Mundane ဥပဒေသ အရ- “သံတမာန်များ၊ နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲသို့ အကြံပေးသူများ၊ ဆရာများ၊ ဥပဒေ ပညာရှင်များ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းများ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြည့်စုံ ကြွယ်ဝမှု။” ကို ပြဆို၏။ တစ်ဆက်တည်း ၂-တန့် သခင် တာဝန်ကို ယူထား၏။ ၂-တန့် သခင်၏ မန်ဒိန်း (Mundane) တာဝန်သည်- “တိုင်းပြည်၏ နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာရေး၊ ပြည်သူ လူထု၏ ကြွယ်ဝမှု၊ သုံးစွဲ နိုင်မှု၊ ငွေကြေး တည်ငြိမ်မှု၊ နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက်။” တို့ ဖြစ်၏။
တစ်နည်းအားဖြင့် စနေသည် ၄-တန့် ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ သခင်လည်း ဖြစ်၏။ စနေ ၏ သဘာဝ ပရိယာယ် နှင့် ၄-တန့် သခင် အဖြစ် တာဝန် ယူထားရသော ကာရက အဓိပ္ပါယ်ကို ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။ စနေသည်- “နိုင်ငံတော် အောက်ခြေ၀န်ထမ်းများ၊ ဆင်းရဲသူ လူတန်းစားများ၊ အောက်ခြေ လုပ်ငန်းများ နှင့် သတ္တုတွင်း တူးဖေါ်ရေးများ၊ ဥပဒေ ထိမ်းသိမ်းရေး ဆောင်ရွက်ရသူများ၊ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်သူများ၊ အများပြည်သူပိုင် အဆောက်အဦများ၊ ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်များ။” ကို တာဝန်ယူ၍- ၄-တန့် သခင် အဖြစ်ဖြင့်- “စာသင်ကျောင်း၊ စသည့် ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတော် မြေယာ ကဏ္ဍ၊ ကုန်သွယ်ရေး နှင့် စိုက်ပျိုးရေး။ လူထု အုပ်စု၊ သဘာဝ သယံဇာတ၊ သတ္တုတွင်း၊ ငြိမ်းချမ်း သာယာ အေးချမ်းမှု၊ နိုင်ငံရေး တည်ညိမ်မှု။” ကို တာဝန်ယူ၏။
နောက်ဇာတာတွင် တွေ့ရှိမှု နှင့် ထပ်နှိုင်းယှဉ်လိုက်ပါဦး။
လွတ်လပ်ရေး ဥပဒေ ဇာတာ- နံနက် ၀း၀၀ နှင့် အရေးအခင်းများ ကို စစ်ဆေးခြင်း။
တနင်္ဂနွေ နှင့် ဗုဒ္ဓဟူး တို့သည် ဂြိုဟ်ဆိုးများ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို - ထိုအရေးအခင်း ကာလများတွင် - အခြားသော ဂြိုဟ်များထက် ထင်ရှားစွာ ခံစားရလိုက်၏။ တနင်္ဂနွေသည်- တရား ဥပဒေ စိုးမိုးရေး။ ဥပဒေပြု အဖွဲ့အစည်း။ နိုင်ငံတော် အစိုးရ တို့ကို ကိုယ်စားပြုသကဲ့သို့- ဤဇာတာ အရ- ၁၂-ဘာဝ၏ မူလ တြိဂေါဏ အိမ်ရှင် (သခင်) ဖြစ်၏။ မန်ဒိန်း မူ အရ- ၁၂-တန့် သခင်သည်- “ငွေကြေး ဆုံးရှုံးမှုများ၊ နိုင်ငံတော် အသုံးစရိတ်၊ မှောင်ခို စသော လျှို့ဝှက် ရာဇ၀တ်မှုများ၊ ဆေးရုံ၊ စစ်ရေး နှင့် ဆုံးရှုံးမှုများ။ သောက ပူပန် ခြင်း၊ တိုင်းပြည် အနေအထား အရ စိုးရိမ်ကြောင့်ကျရမှုများ။” ထိုဖြစ်ရပ်နှင့် ဆိုင်သော တနင်္ဂနွေ အား ဂြိုဟ်ဆိုးများမှ တိုက်ဖျက်ခြင်း ခံရခြင်းသည် ဖြစ်ပျက်သော ကိစ္စနှင့် ပို၍ ဆီလျော်သည် ဟု ထင်မြင်မိပါသလား။
ဗုဒ္ဓဟူးသည် “နည်းဗျူဟာ ပညာရှင်များ၊ ဥာဏ လုပ်သားများ၊ စာရေး ဆရာ စသော စာပေ ပညာရှင်များ၊
သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး နှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဌာနများ၊ ပုံနှိပ်ရေး၊ ပညာရေး ၀န်ထမ်း၊ ပြောရေး ဆိုခွင့် ရှိသူများ၊ သတင်း နှင့် ပြန်ကြားရေး။ ” တို့ကို ကိုယ်စားပြု၏။ တစ်ဆက်တည်းပင်- ဇာတာ တစ်စောင် အတွက် အရေးအကြီးဆုံး တာဝန်ကို ယူထားသည့် - လဂ်သခင် ဖြစ်နေ၏။ လဂ်သခင် သည် မည်သည့် အချက်များကို ကိုယ်စားပြုနေပါသနည်း။ “တစ်တိုင်းပြည်လုံး၏ ယေဘူယျ အခြေအနေ၊ ပြည်သူလူထု ကျန်းမာရေး။ အုပ်ချုပ်မှု အနေအထား။ နိုင်ငံတော် တည်ညိမ်မှု၊ နိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ကမ္ဘာမှ သတ်မှတ်သည့် အဆင့်အတန်း” စသည်တို့ကို လဂ်သခင်သည် ကိုယ်စားပြုကြောင်း အထက်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါ၏။
ဖြစ်ရပ်တို့ကို မည်သည့် ဇာတာက ပို၍ ပီပြင်စွာ ပြသနေပါသနည်း။
မပြီးသေးပါ - ကောဇာ ဂြိုဟ်ဆိုး များမှ - မူလ ဘာဝများကို လွှမ်းမိုး ဖျက်ဆီး ထားပုံကို ဆက်လက်၍ လေ့လာကြပါအံ့။
လွန်စွာ ထူးခြားစွာ စတင်မြင်တွေ့ရသည်က- ၁၉၆၂ နှင့် ၁၉၈၈ ကိစ္စများတွင် စုစုပေါင်း ဘာဝ ၁၂-ခု အနက်၊ ဘာဝ ၁၀-ခု အထိ အဆိုးဓါတ်တို့က အင်အား ကြီးမားစွာ လွှမ်းမိုး ထားပုံ ဖြစ်၏။
ထိုကိစ္စများသည် တိုင်းပြည်နှင့် အ၀ှမ်း- မည်ရွေ့မည်မျှ ခံစားခဲ့ရသည်ကို ပြဆိုနေခြင်း ဖြစ်၏။ တိုင်းပြည်၏ အရေးပါသော ကဏ္ဍများထိခိုက်သွားမှု နှင့် ဂြိုဟ်ဆိုးများ လွှမ်းမိုးထားမှု တို့မှာ- အလွန်ထူးခြားစွာ တိုက်ဆိုင်နေ၏။ အခြားသော ဖြစ်ရပ်တို့ကိုလည်း ကြည့်ပါလေ။
အကြိမ် အရေအတွက်အားဖြင့် အများဆုံး ထိခိုက်နေခဲ့သည်မှာ- ၄-တန့်၊ ၇-တန့်၊ ၁၀-တန့် နှင့် ၁၁-တန့် ဘာဝ တို့ ဖြစ်၏။ ၄င်းတို့သည် မည်သည် တို့ကို ကိုယ်စား ပြုပါသနည်း။ ၄-တန့်သည်- “စာသင်ကျောင်း၊ စသည့် ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတော် မြေယာ ကဏ္ဍ၊ ကုန်သွယ်ရေး နှင့် စိုက်ပျိုးရေး။ လူထု အုပ်စု၊ သဘာဝ သယံဇာတ၊ သတ္တုတွင်း၊ ငြိမ်းချမ်း သာယာ အေးချမ်းမှု၊ နိုင်ငံတော် တည်ညိမ် အေးချမ်းမှု။” တို့ကို ကိုယ်စားပြုသလို- ၇-တန့်သည်- “နိုင်ငံတကာ ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေး၊” တို့ကို ကိုယ်စားပြု၏။ ၁၀-တန့်သည်- “နိုင်ငံ၏ မြင်သာသော ကံကြမ္မာ။” ၁၁-တန့်သည်- “နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး နှင့် အနာဂါတ် အစီအစဉ်များ။ တိုင်းပြည်၏ ဂုဏ်အဆင့် အတန်း။” တို့ကို ကိုယ်စားပြု၏။
ဆက်လက်၍ ဒဿာ စစ်ဆေးမှုများ ပြုကြည့်ကြပါစို့၊
ယခုတွေ့ရသည်က- ကြာသပတေး ထူလ ဒဿာ၊ ကြာသပတေး အန္တရများ တွင်- နိုင်ငံရေး ပြဿနာ၊ အရေးအခင်းများ ထင်ရှားစွာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်၏။ ကြာသပတေးသည်- ပညာရေး နှင့် ပတ်သက်သူများ- “ဆရာများ၊ ဥပဒေ ပညာရှင်များ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းများ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြည့်စုံ ကြွယ်ဝမှု။” တို့ကို ဖေါ်ပြသော ဂြိုဟ်ဖြစ်ကာ- ဤဇာတာ အရ- ၄-တန့် သခင်ဖြစ်၏။
အင်အားနည်းပါးသော ဂြိုဟ်တို့၏ ဒဿာ စားသော ကာလများတွင်- ကောဇာ ဂြိုဟ်ဆိုးများ၏ လွှမ်းမိုးမှု ထင်ရှားပါက- မကောင်းသော ဖြစ်ရပ်များ၊ အနိဋ္ဌာရုံများ ဖြစ်ပေါ် တတ်ကြောင်းကို မိုးတား ဆောင်းပါး များစွာတွင် ဖေါ်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါ၏။ ဤဇာတာတွင် ကြာသပတေးသည်- ဂြိုဟ်များ အားလုံးတွင် အင်အား အနည်းဆုံးသော အခြေအနေတွင် တည်ရှိနေသည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။
ထိုမျှ မကသေး- ပြတန္တရ ဒသာရှင် ဗုဒ္ဓဟူးသည် လဂ်သခင် ဖြစ်၍- ၄င်းသည်လည်း- အင်အား အနှုတ် ပြနေသည်သာမက- မူလ ဇာတာတွင် ဂြိုဟ်ဆိုးများ၏ လွှမ်းမိုးမှု ရှိထားခြင်းကိုလည်း တွေ့မြင်နိုင်၏။
စာဖတ်သူသည်- နက္ခတ်ဗေဒင် နှင့် အကျွမ်းတ၀င် အနည်းငယ်ရှိပါက- ယခု ကွာခြားမှုတို့ ထင်ရှားစွာမြင်မည်ဟု ယူဆပါသည်။
ပြီးခဲ့သော တွေ့ရှိမှုများကို ပြန်လည် ခြုံငုံ နှိုင်းယှဉ် စစ်ဆေးခြင်း။
ယခုတွေ့ရှိမှုများကို ပြန်လည် သုံးသပ် အမှတ်ပေး ယှဉ်ထိုးကြည့်ရာ အောက်ပါ အတိုင်း တွေ့ရပါသည်။ ဖြစ်ရပ် နှင့် ဗေဒင် သဘောသည် အလွန် သဘာဝကျ နေခြင်း ဖြစ်ပါက- ၃-မှတ် အထိ အများဆုံး ပေး၍၊ သက်ဆိုင်သည်ဟု မယူဆပါက- သုညမှတ် ပေးပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများ မိမိသဘောကျသလိုလည်း အမှတ်ပေးကြည့် နိုင်ပါသည်။
ဤသုံးသပ်နည်း ကို စာရှူသူ အနေဖြင့် သိပ်သဘောမကျပါလျှင်- မိမိသုံးစွဲနေကြ နည်းများဖြင့်လည်း- ကြိုက်သလို စိစစ်၊ ဝေဘန် အမှတ်ပေးနိုင်ပါသေး၏။
စာဖတ်သူ နက္ခတ်သုတေသီသည် မိုးတားနည်းကို မသုံးလို ပဲ မိမိသုံးလို သည့် နည်းများဖြစ်သည့်-
- စနေ၊ နှင့် အင်္ဂါကို ပါပ ဂြိုဟ်ဆိုး အဖြစ်ယူဆမည် ဆိုပါက- တနင်္ဂနွေနှင့် ခိဏစန်း ကိုလည်းကောင်း၊ ပါပကတ္တရိ သင့်သော ဗုဒ္ဓဟူးသည် ပါပဂြိုဟ် ဖြစ်သွားသည်ကိုလည်းကောင်း ပယ်ချန်မထားသင့်။
- ထိုနည်းတူ- ၂-တန့်၊ ၇-တန့် တို့ကို မာရက အဖြစ်ယူမည် ဆိုပါက- ဒုဌာန အိမ်ရှင်များသည်လည်း ပါပ ဖြစ်သည်ကို မချန်လှပ်သင့်။
- ထိုနည်းတူ- နောက်တစ်ဆင့် တက်ပြီး- အနောက်တိုင်း အယူအဆ ဂြိုဟ်များ ဖြစ်သည့် ယူရေးနပ်စ်၊ နက်ပ်ကျွမ်း၊ ပလူတို တို့ကိုပါ ဂြိုဟ်ဆိုး အဖြစ် ဆက်ယူပါက- ၁၂-ရာသီခွင် တစ်ခုလုံး ဂြိုဟ်ဆိုးများဖြင့် ပြည့်နေသည့် နောက်တွင်- ထိုဂြိုဟ်ဆိုးတို့ ပူး၊မြင်၊ သော်လည်း- မကောင်းသော ဖြစ်ရပ်များ မဖြစ်သော နေ့စွဲများစွာကို လျစ်လျူ မပြုသင့်။
- မိမိသုံးစွဲသော နည်းစနစ်ကို တစ်မူတည်း မပြောင်းမလဲ- မချန်မလှပ်ပဲ- စစ်ဆေးပြီး သုတေသန ပြုကြရန် အကြံပြုပါသည်။
နောက်တစ်ပါတ် ဆောင်းပါးတွင်- သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များ နှိုင်းယှဉ်ချက် တို့ကို ဖေါ်ပြပါမည်။
(နိုင်ငံရေး ဗေဒင် နှင့် မိုးတား ၏ ရပ်တည်ချက် တို့ကို “၂၀၁၂-နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ သုတေသန။ အပိုင်း (၁)” တွင် ဖတ်ရှု နိုင်ပါသည်။)
(ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ရပ်များ နှင့် မြန်မာ့ ဇာတာ ယှဉ်တွဲ ဆန်းစစ်ချက်များကို “၂၀၁၂-နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ သုတေသန။ အပိုင်း (၂)” တွင် ဖတ်ရှု နိုင်ပါသည်။)
မြန်မာ နက္ခတ်ဗေဒင် သုတေသီများ ထွန်းကား နိုင်ပါစေ။
Labels: မိုးတား နက္ခတ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ မန်ဒိန်း
၂၀၁၂-နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ သုတေသန။ အပိုင်း (၂)
မြန်မာ နိုင်ငံ ဇာတာ ၂-မျိုး။
နောက်ပါ ယှဉ်တွဲ ဆန်းစစ်ချက်များတွင်- လက်ရှိ အများလက်ခံထားကြသော ဇန်န၀ါရီလ ၄-ရက်၊ နံနက် ၄း၂၀ ဇာတာအား “အလံတင်၊ အလံချ ဇာတာ” ဟု အမည်ပေးမည် ဖြစ်ပြီး၊ လွတ်လပ်ရေး ကြေညာ စာတမ်း အက်ဥပဒေ အရ၊ ဇန်န၀ါရီလ ၄-ရက်သို့ ရောက်ရောက်ချင်းကာလ၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ၃-ရက်နေ့ ည ၁၂-ဇာတာ အား “လွတ်လပ်ရေး ဥပဒေ ဇာတာ” ဟု - စာဖတ်သူများ ခွဲခြား နိုင်အောင် အမည်ပေးထားမည် ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံ အတွက် အရေးအကြီးဆုံး ကိစ္စ တစ်ခုဖြစ်သဖြင့်- ပထမဆုံး လွတ်လပ်ရေး အခမ်းအနားကို မင်္ဂလာ အချိန်ကို- ရွေးချယ် သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည့် မြန်မာ နက္ခတ် ပညာရှင်ကြီးများ၏ စေတနာ နှင့် အားထုတ်မှု အကြောင်းကို မြန်မာ နက္ခတ် ပညာရှင်ကြီးများ အယူအဆ။ (၂) မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ဇာတာ ဆောင်းပါးတွင် ဖေါ်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အောက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်မှာ-လွတ်လပ်ရေး ကြေညာ စာတမ်း အက်ဥပဒေ အရ- မြန်မာ နိုင်ငံအား-
(1) “On the appointed day, Burma shall become an independent country, neither forming part of His Majesty's dominions nor entitled to His Majesty's protection”. “သတ်မှတ်ထားသော နေ့တွင်၊ မြန်မာနိုင်ငံသည်- အင်္ဂလန် ဘုရင် မင်းမြတ်၏ ဒိုမီနီယမ် နိုင်ငံ အနေဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဘုရင် မင်းမြတ်၏ အကာအကွယ် ပေးမှု အောက်တွင် လည်းကောင်း မရှိစေရပဲ- လွတ်လပ်သော နိုင်ငံ အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိစေရမည်။”
ထိုသတ်မှတ်သော နေ့- မည်သည့် နေ့ ဖြစ်သည် ဆိုသည်ကိုလည်း- ဥပဒေ အပိုဒ် (၂) အရ-
“In this Act, the expression "the appointed day" means the
fourth day of January, nineteen hundred and forty-eight”- “ယခု ဥပဒေ အရ- သတ်မှတ်ထားသော နေ့၏ ဖွင့်ဆိုချက်သည်- ၁၉၄၈-ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၄-ရက် ဖြစ်သည်။”
ဆိုလိုသည်မှာ- အလံတင် အလံချ အခမ်းအနား လုပ်သည် ဖြစ်စေ၊ မလုပ်သည် ဖြစ်စေ၊ အမြောက်ဖေါက်၊ ဗြောက်အိုးဖေါက်ပြီး- ပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲ လုပ်သည် ဖြစ်စေ- မလုပ် သည် ဖြစ်စေ- - ၁၉၄၈-ဇန်န၀ါရီလ ၄-ရက်သို့ မြန်မာ စံတော်ချိန် အရ စက္ကန့် စွန်းလျှင် စွန်းချင်း- ဗြိတိသျှ တို့အနေဖြင့် - မြန်မာ နိုင်ငံအား လုံးဝ အုပ်ချုပ်ခွင့် မရှိတော့ပဲ- မြန်မာများ ကိုယ့် ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးခွင့်ကို- ထိုအချိန်မှပင် စတင်ရရှိပြီ ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ ဖြစ်ပြီးခဲ့သော ဖြစ်ရပ်များ အရ- ထိုဇာတာ ၂-ခုစလုံးကို ဘက်မလိုက်ပဲ- မူအတူ၊ စစ်ဆေးနည်း အတူဖြင့် အောက်ပါ ဖြစ်ရပ်များကို စစ်ဆေးကြည့်ကြပါစို့။
မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့သော ဖြစ်ရပ်များ။
မြန်မာနိုင်ငံ တွင် နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲ ထင်ရှားသော ဖြစ်ရပ်များ၊
မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ငလျင်ကြီးများ လှုပ်ခဲ့သော ဖြစ်ရပ်များ။
မြန်မာနိုင်ငံ တွင် မီးဘေး ကြုံခဲ့သော ဖြစ်ရပ်များ။
မြန်မာနိုင်ငံ တွင် လေမုန်တိုင်းဘေး ကြုံခဲ့သော ဖြစ်ရပ်များ။
မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ရေဘေး ကြုံခဲ့သော ဖြစ်ရပ်များ။
မြန်မာနိုင်ငံ တွင် လေယာဉ်ပျက်ကြခဲ့သော ဖြစ်ရပ်များ။
မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ရေကြောင်း အန္တရယ် များ ပေါ်ပေါက်ခဲ့မှုများ။
ဗုံးပေါက်ကွဲ မှုများနှင့် မြန်မာ နိုင်ငံ ။
အီရတ် ကဲ့သို့သော နေ့စဉ် အကြမ်းဘက်မှု ဖြစ်ပွားသော နိုင်ငံမဟုတ်သကဲ့သို့၊ ယခင်က တမီလ် ပြောက်ကျားများ၊ အိုင်အာအေများ၊ အယ်လ်ခိုင်ဒါ များ၊ ထိုင်းနိုင်ငံကဲ့သို့ တောင်ပိုင်း ခွဲထွက်ရေး သမားများ မရှိသော မြန်မာ နိုင်ငံသည်- ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ တွင်တော့ သိပ်ပြီး တော့ ခေတ်နောက် မကျန်ခဲ့ပါချေ။ အောက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်က ယခု အချိန်အထိ သိရှိစုဆောင်း ထားသမျှသော မြန်မာ နိုင်ငံ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု မှတ်တမ်း ဖြစ်၏။
ဆက်လက် ဖေါ်ပြထားသည်က- ထိုဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ချိန်တွင် ကောဇာ ဂြိုဟ်တို့ တည်နေပုံ အနေအထား ဖြစ်၏။
ဟုတ်ပါပြီ။ ယခု အခါ ဇာတာ ၂-စောင်နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ ဆန်းစစ်ကြည့်ကြပါအံ့။
အလံတင် အလံချ အခမ်းအနား ဇာတာ (အများလက်ခံထားသော ဇာတာ)- နံနက် ၄း၂၀ နှင့် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ။
ဤ ဇာတာ အရ ဆိုပါလျှင်- မြန်မာပြည်၏ ဘွားဒဿာ သည် အင်္ဂါ ထူလ၊ ရာဟု ပြတန္တရ နှင့် စနေ အန္တရ အခါ ဖြစ်ကာ- အင်္ဂါသည် ၆-တန့် သခင် ဖြစ်သည်မှာလည်း မှတ်သားဘွယ်ပင် ဖြစ်ပါ၏။ ဘွား ဒဿာ နှင့် ဘာဝ အချို့ ထိခိုက်မှု ရှိနေသော်လည်း- စနေ နှင့် သောကြာ မှ လွဲ၍ အခြားဂြိုဟ်များ အင်အား အလွန်ကောင်းသော အနေအထားကို ယူထားသည် ဖြစ်၍- ကောင်းသော ဇာတာ တစ်စောင် ဟု ဆိုရပါမည်။ အဖြစ်နိုင်ဆုံး အနေအထားထဲမှ အကောင်းဆုံး အချိန် တစ်ခုကို- ကွန်ပျူတာ အကူအညီ မပါပဲလျှက်- ရွေးချယ်ပေးခဲ့သော မြန်မာ ပညာရှင်ကြီးများအား ဦးညွတ် လိုက်ရပါ၏။
ယခု အခါ - အထက်ပါ မင်္ဂလာအခါ ဇာတာ မူလ ဇာတာပေါ်တွင် - ဗုံးပေါက်ကွဲသော ဖြစ်ရပ်များ နှင့် ယှဉ်တွဲ၍- တစ်ပြိုင်နက် တွက်ချက် လိုက်ပါသည်။ ဖေါ်ပြပါ ဇယားသည်- ဂြိုဟ်များ အနေဖြင့် အပူးအမြင် အားဖြင့်- လွှမ်းမိုးမှု ကို မူတည်၍- နီးစပ်လျှင် ပမာဏ များကာ။ ၁-ဒီဂရီ အတွင်း ဆိုပါက- ၁၀၀% ဖြစ်ပြီး၊ ၅-ဒီဂရီ ဆိုပါက ၆၀% ဖြင့် လွှမ်းမိုးမှု ပမာဏများ အရ တွက်ချက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ၅-ဒီဂရီ ထက် ပို၍ ကွာဝေးမှု များကို ထည့်မတွက်ပါချေ။ ဂြိုဟ်ဆိုး ဆိုသည်မှာ ၆-တန့်၊ ၈-တန့်၊ ၁၂-တန့် တို့၏ မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင်များ နှင့် ရာဟု၊ ကိတ် တို့ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ မိုးတား အခြေခံ ဆောင်းပါး နှင့် ဆက်စပ် ကြည့်နိုင်ပါသည်။
မိုးတား နည်းသည်- စနေ၊ အင်္ဂါတိုင်းကို အမြဲဆိုးသည်ဟု မယူဆပဲ၊ ဒုဌာန ဘာဝ သခင်ဖြစ်မှ ဆိုးသည်ဟု ယူခြင်း၊ ၂-တန့်၊ ၇-တန့် ဘာဝများကို မာရက သခင်ဟု မယူခြင်း၊ ဂြိုဟ်တစ်လုံး အနေဖြင့် ၂-ရာသီ ပိုင်ဆိုင်မှုတိုင်းကို - အသုံးမပြုပဲ- မူလတြိဂေါဏ အိမ်ရှင် အနေဖြင့်သာ ယူခြင်းများကိုသာ အဓိက အသုံးပြုပါသည်။
ဂရပ်နှင့်- အထက်ပါ ဇယားငယ် ၏ ဆိုလိုရင်းမှာ- ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်ရပ်များတွင်- မူလ တနင်္ဂနွေ အား ကောဇာ ဂြိုဟ်ဆိုးများ၏ နီးစပ်စွာ လွှမ်းမိုးမှုက- ၃၀% (စုစုပေါင်း ဖြစ်ရပ် ၁၀ ကြိမ်တွင် ၃-ကြိမ်) ရှိ၏။ မူလ တနင်္လာအား ကောဇာ ဂြိုဟ်ဆိုးများ၏ နီးစပ်စွာ လွှမ်းမိုးမှုမှာ ၇၀% (စုစုပေါင်း ဖြစ်ရပ် ၁၀ ကြိမ်တွင် ၇-ကြိမ်) ရှိ၏ ဆိုသည်ကို ပြခြင်း ဖြစ်၏။
ဤဇာတာ အရအားဖြင့်- ထိုဗုံးပေါက်သော နေ့များတွင်- အကြိမ် အရေ အတွက် အားဖြင့် အများဆုံး ခံစားရသော ဂြိုဟ်တို့မှာ- တနင်္လာ နှင့် စနေ ဖြစ်၏။ ၄င်းတို့သည် မူလပရိယာယ်- သဘာဝ တာဝန်အားဖြင့်- ပြည်သူလူထု၊ လက်လုပ်လက်စား လူတန်းစားများကို ဖေါ်ပြသော ဂြိုဟ်သဖြင့် ကိုက်ညီ မှန်ကန်နေ၏။ သို့သော်- တနင်္လာသည်- ဤဇာတာ အရ ၉-တန့် သခင်ဖြစ်၍၊ စနေသည် ဤဇာတာ အရ- ၄-တန့် သခင် ဖြစ်၏။
၉-တန့် သခင် အနေဖြင့် တာဝန်ယူသော- “ဘုရား၊ ကျောင်းကန်၊ ဗလီ၊ ဘုရားကျောင်း စသော ဘာသာရေး အဆောက်အဦများ၊ တရားရေး ဆိုင်ရာ စနစ် နှင့် စာရိတ္တပိုင်း ဖြောင့်မတ်မှု။ သံတမာန် ဆိုင်ရာ ကိစ္စများ၊ တိုးတက် မှုများ၊ နိုင်ငံခြား ပညာသင် ပို့လွှတ်မှုများ။” အနေဖြင့် လည်းကောင်း၊
၄-တန့် သခင် အနေဖြင့် တာဝန်ယူသော “စာသင်ကျောင်း၊ စသည့် ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတော် မြေယာ ကဏ္ဍ၊ ကုန်သွယ်ရေး နှင့် စိုက်ပျိုးရေး။ လူထု အုပ်စု၊ သဘာဝ သယံဇာတ၊ သတ္တုတွင်း၊ ငြိမ်းချမ်း သာယာ အေးချမ်းမှု၊ နိုင်ငံရေး တည်ညိမ်မှု။” များ အနေဖြင့် တိုက်ရိုက် ထိခိုက်မှု မရှိခြင်း ကို သိနိုင်၏။
ဆက်လက်၍- ထိုရက်ကာလများတွင် ကောဇာ ဂြိုဟ်ဆိုးများက- မူလ ဘာဝများအား လွှမ်းမိုးထား မှုကို လေ့လာ လိုက်သော အခါ အောက်ပါ အတိုင်း တွေ့ရပါ၏။
ကောဇာ ဂြိုဟ်ဆိုးများက- မူလ ဘာဝများ၏ အလယ်မှတ် တို့အား လွှမ်းမိုးထား မှုကို လေ့လာ လိုက်သော အခါ ထူးခြားသော အနေအထား မတွေ့ရပါတော့ချေ။ အားလုံးသည် မျှနေသော သဘောဖြစ်၍- ဘာဝ အချို့ အနေဖြင့် အထူးတလည် သတ်သတ်မှတ်မှတ် ထိခိုက်ခြင်း မရှိရသည်ကို သတိပြုမိနိုင်၏။
မပြီးသေးပါချေ။ ပြည့်စုံ နိုင်သမျှ ပြည့်စုံစေရန် ဆက်လက်၍- ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဒဿာများကို လေ့လာ၍- မည်သည့် ဒဿာများတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သနည်းကို လေ့လာကြည့်ပါစို့။
ဒဿာ တို့ကို လေ့လာလိုက်သော အခါ-
ဤကဲ့သို့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများကို ဒဿာ စနစ်ဖြင့် လေ့လာလိုက်သော အခါ- စနေ ထူလ ဒဿာ နှင့် စနေ ပြတန္တရ ဒဿာ သည် အထင်ရှားဆုံး ဖြစ်၏။ တစ်နည်းအားဖြင့် စနေသည် ဤဇာတာ အရ- ၄-တန့် ဘာဝ၏ မူလတြိဂေါဏ သခင်လည်း ဖြစ်၏။ စနေ ၏ သဘာဝ ပရိယာယ် နှင့် ၄-တန့် သခင် အဖြစ် တာဝန် ယူထားရသော ကာရက အဓိပ္ပါယ်ကို ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။ စနေသည်- “နိုင်ငံတော် အောက်ခြေ၀န်ထမ်းများ၊ ဆင်းရဲသူ လူတန်းစားများ၊ အောက်ခြေ လုပ်ငန်းများ နှင့် သတ္တုတွင်း တူးဖေါ်ရေးများ၊ ဥပဒေ ထိမ်းသိမ်းရေး ဆောင်ရွက်ရသူများ၊ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်သူများ၊ အများပြည်သူပိုင် အဆောက်အဦများ၊ ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်များ။” ကို တာဝန်ယူ၍- ၄-တန့် သခင် အဖြစ်ဖြင့်- “စာသင်ကျောင်း၊ စသည့် ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတော် မြေယာ ကဏ္ဍ၊ ကုန်သွယ်ရေး နှင့် စိုက်ပျိုးရေး။ လူထု အုပ်စု၊ သဘာဝ သယံဇာတ၊ သတ္တုတွင်း၊ ငြိမ်းချမ်း သာယာ အေးချမ်းမှု၊ နိုင်ငံရေး တည်ညိမ်မှု။” ကို တာဝန်ယူ၏။
သဘာဝ ကျ တိုက်ဆိုင်မှု ရှိမရှိ ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ပါ။
တစ်ဖန်- အန္တရ ဒဿာ အရ အထင်ရှားဆုံး ဖြစ်နေသော သောကြာ အန္တရကို လေ့လာပါဦး။ အလံတင် အလံချ မြန်မာ နိုင်ငံ ဇာတာ အရ- ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများသည် သောကြာ အန္တရတွင် အများဆုံး ဖြစ်၏။
သောကြာ၏ သဘာဝ တာဝန် - ဂြိုဟ် ပရိယာယ်အရ- “နိုင်ငံတော် အရင်းအမြစ်များ၊ ဟော်တယ် နှင့် ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်းများ၊ ရုပ်ရှင် နှင့် အနုပညာ လုပ်ငန်းများ၊ အနုပညာရှင်များ၊ ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းများ၊ ကလေးသူငယ် မွေးဖွားမှုများ၊” ဖြစ်၏။ သောကြာသည် အဆိုပါ ဇာတာ အရ- ၁၂-တန့် ဘာဝ သခင် ဖြစ်ပြီး- ၁၂-တန့် သခင်၏ တာဝန်မှာ- “ငွေကြေး ဆုံးရှုံးမှုများ၊ နိုင်ငံတော် အသုံးစရိတ်၊ မှောင်ခို စသော လျှို့ဝှက် ရာဇ၀တ်မှုများ၊ ဆေးရုံ၊ စစ်ရေး နှင့် ဆုံးရှုံးမှုများ” ဖြစ်၏။
ကောင်းပါပြီ။ ယခု- စစ်ဆေးခဲ့သော ဥပဒေများ အတိုင်း- အခြား ဇာတာကိုလေ့လာကြပါစို့-
လွတ်လပ်ရေး ဥပဒေ ဇာတာ- နံနက် ၀း၀၀ နှင့် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ။
ဤဇာတာ အရအားဖြင့်- ထိုဗုံးပေါက်သော နေ့များတွင်- စနေဂြိုဟ်သည် အားလုံးသော ဂြိုဟ်တို့ အနက် ထင်ထင်ရှားရှား- တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီးခြင်း ခံရသည်ကို တွေ့ရတော့၏။ မူလပရိယာယ်- သဘာဝ တာဝန်အားဖြင့်- ပြည်သူလူထု၊ လက်လုပ်လက်စား လူတန်းစားများကို ဖေါ်ပြသော ဂြိုဟ်သဖြင့် သဘာဝ တာဝန်- မူလဂြိုဟ် ပရိယာယ် အားဖြင့်- ကိုက်ညီ မှန်ကန်နေ၏။ ဆက်ကြည့်ပါဦး။
စနေဂြိုဟ်သည် ဤဇာတာ အရ- ၆-တန့် သခင် အနေဖြင့် တာဝန်ယူသောကြောင့်- “နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်မှု၊ အမှုအခင်း ဖြစ်ပွားမှု၊ မတော်တစ်ဆမှုများ၊ ထိခိုက်မှုများ။ ရန်သူ၏ တိုက်ခိုက်မှု။” အနေဖြင့် အာရီ ဘာဝ သခင်ကို တိုက်ခိုက် ခံရခြင်းဖြင့်- အမှုအခင်း၊ ထိခိုက်မှု၊ တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ခြင်းကို မြင်ကြရပါ၏။
ဆက်လက်၍- ထိုရက်ကာလများတွင် ကောဇာ ဂြိုဟ်ဆိုးများက- မူလ ဘာဝများအား လွှမ်းမိုးထား မှုကို လေ့လာ လိုက်သော အခါ အောက်ပါ အတိုင်း တွေ့ရပါ၏။ ထိုအခါ- ၁-တန့်၊ ၇-တန့်၊ ၁၀-တန့် တို့၏ အလယ်မှတ် များကို ထင်ရှားစွာ ဖျက်ဆီးခံရခြင်းကို မြင်ရ၏။
တိုင်းပြည်တွင် ထိခိုက်မှု သဘောကို ထင်ရှားစွာ ပိုမြင်လာရ၏။
ဆက်လက်၍- ထိုရက်များတွင် မည်သည့် ဘာဝ တို့သည် အကြိမ် အရေအတွက် များပြားစွာ ထိခိုက်နေသနည်း ကို လေ့လာသောအခါ- ၁-တန့်၊ ၇-တန့် နှင့် ၁၀-တန့် တို့ကို ထင်ရှားစွာ ထိခိုက်ခြင်း ခံရ၏။ ၁-တန့်ဘာဝ ခေါ် လဂ်သည်- “တစ်တိုင်းပြည်လုံး၏ ယေဘူယျ အခြေအနေ၊ ပြည်သူလူထု ကျန်းမာရေး။ အုပ်ချုပ်မှု အနေအထား။ နိုင်ငံတော် တည်ညိမ်မှု၊ နိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ကမ္ဘာမှ သတ်မှတ်သည့် အဆင့်အတန်း။” ကို ဖေါ်ပြ၍၊ ၇-တန့် နှင့် ၁၀-တန့် တို့သည် “စစ် နှင့် နိုင်ငံတကာ ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေး၊ နိုင်ငံတကာ သဘောတူညီမှုများ။ ဟော်တယ် နှင့် ခရီးသွားလာ ရေး လုပ်ငန်းများ၊” ကိုလည်းကောင်း၊ “နိုင်ငံ၏ မြင်သာသော ကံကြမ္မာ။” ကိုလည်းကောင်း ဖေါ်ပြနေ၏။
တန်းတူ စစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်၍- ထိုဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ခဲ့သော ဒဿာ ကာလများကိုပါ ဆက်ကြည့်ကြပါစို့။
စနေထူလ ဒဿာ ကာလတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု အများဆုံး ဖြစ်ခဲ့၏။ စနေသည် ဤဇာတာ အရ အာရီဘာဝ ဖြစ်သော ၆-တန့် သခင် ဖြစ်ခြင်းကြောင့်- “နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်မှု၊ အမှုအခင်း ဖြစ်ပွားမှု၊ မတော်တစ်ဆမှုများ၊ ထိခိုက်မှုများ။ ရန်သူ၏ တိုက်ခိုက်မှု။” ကို ဖေါ်ပြနေသည်မှာ ထင်ရှား၏။
သုတေသန တစ်ခုကို ဖြစ်သလို ကောက်ချက်မဆွဲမိစေရန် အတွက် ပြည့်စုံစေရန်- ဆက်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
သောကြာ နှင့် ကိတ် အန္တရဒဿာ ကာလများ၊ သောကြာ ပြတန္တရများတွင်လည်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှု အဖြစ်များသည်ကို တွေ့ရ၏။ ကိတ်သည်- “လောကုတ္တရာ ကိစ္စရပ်များ၊ လောကီ စည်းစိမ် များ ပျက်စီးခြင်း၊ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ မတော်တစ်ဆ ဖြစ်ရပ်များ။” များကို ဖေါ်ပြနေခြင်း၊ သောကြာသည်- “ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းများ၊ ပွဲလမ်း သဘင်များ၊” ကို ဖေါ်ပြနေခြင်း ဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရ၏။
(ဆက်လက်၍- အရေး အခင်း များနှင့် မြန်မာ နိုင်ငံ သုံးသပ်ချက်ကို တင်ပြပါမည်။)
၂၀၁၂-နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ သုတေသန။ အပိုင်း (၁)
ကမ္ဘာကြီး ပျက်စီးမည် ဘာဘာ ညာညာဖြင့်- လူပြော သူပြောများလှသော ၂၀၁၂-သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ လူမျိုးများက- အယူစွဲ သိပ်ကြီးသော၊ အလွန် အယူသည်းသော လူမျိုးများ မဟုတ်ဟု ဆိုရ သော်လည်း- ခရီးသွားလျှင်- ဘယ်အချိန် ရောက်မလဲ မမေးရ၊ မီးသတ်ကားများ ရေဖြည့်၊ ဆီဖြည့်ထားလျှင် မီးလောင် တတ်သည် ဆိုသော အစွဲ၊ အချို့ ဒေသများတွင်- ဘုန်းကြီးကို ကားခေါင်းခန်းက မတင်ရ- စသည်- စသည် ဖြင့်တော့ ရှိတတ်ကြ၏။ ဟိုရှေးက အစွဲဖြစ်သော- ရက်ရာဇာ ကိုရွေး၊ ပြဿဒါး ကိုရှောင် တတ်သည့် ကိစ္စ၊ နဂါးလှည့် ကို ကြည့်၍ ခရီးသွားခြင်း မျိုးကတော့ နည်းပါး သွားပြီး ဖြစ်သော်လည်း- တနင်္လာနေ့ အလုပ်လုပ်လျှင်- ၂-ခါပြန်လုပ် ရသည် ဟုသော အစွဲလေး မျိုးတော့ ကျန်ရှိနေ တတ်ပါသေး၏။
ခေါင်းထဲတွင် အစွဲလေး တစ်ခု ရှိနေပြီး- တစ်စုံ တစ်ခု အကြောင်း တိုက်ဆိုင်သွားသော အခါ- “ဒါကြောင့် ဖြစ်တာ” ဟု လွယ်လွယ် ကူကူပင် ခေါင်းစဉ် တပ်လိုက်၏။
ထိုဖြစ်ရပ်သည်- “အကြောင်းရင်း” ဟူ၍ မိမိ ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်သော အကြောင်းနှင့် အကြိမ်ပေါင်း မည်ရွေ့ မည်မျှ တိုက်ဆိုင် ပါသနည်း၊
ထို “အကြောင်းရင်း” ဆိုသည်ကကော- မိမိကိုယ်တိုင် သုတေသန လုပ်၍ ရှာဖွေ သိရှိ ထားသော အရာလား၊ ကျမ်း အဆိုအရ၊ ရှေးလူကြီးများ အပြောအရ ကြားဘူး သည်ကို တိုက်ဆိုင် သွားသည် နှင့်- မိမိက ခေါင်းစဉ် တပ်လိုက် မိခြင်းလား၊
ကြားဘူးသော အဆို နှင့် မတိုက်ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စများကရော ဘယ်နှစ်ကြိမ် ရှိခဲ့ ပါသနည်း၊ မိမိကိုယ်တိုင် သေသေ ချာချာ စစ်ကြော ဆန်းစစ်ခဲ့ဘူးပါသလား။
အချက်အလက်များ နှင့် သတ်သတ်မှတ်မှတ် ဝေဘန် ဆန်းစစ်နည်းဖြင့်၊ အစွဲမထားပဲ ဓမ္မဒိဋ္ဌာန် ကျကျ မလေ့လာ သေးပါပဲနှင့် မိမိ ခေါင်းစဉ် တပ်လိုက်သော အကြောင်းရင်းသည် တကယ့် အကြောင်းရင်း ဖြစ် မဖြစ် ပြော၍ မရပါပေ။
အနောက်တိုင်း သိပ္ပံပညာသည်- အဆို Hypothesis တစ်ခု မှန်မမှန်ကို သင်္ချာနည်း၊ ဝေဘန်နည်းများနှင့် စစ်ဆေးပြီးမှ သီအိုရီ Theory အဖြစ် သတ်မှတ်၏။ ဆက်လက်၍ ထိုသီအိုရီ experiment ခေါ် လက်တွေ့ စမ်းသပ် စစ်ဆေးမှုများ ပြု၏။ ထိုသို့ စမ်းသပ် ရာတွင်- မိမိ ဆန်းစစ်သော သီအိုရီ အပေါ်တွင် အခြားသော ဖြစ်နိုင်စရာ အချက် Factor များ ၀င်ရောက် ရောယှက် လာခြင်း မရှိစေရန်၊ သတိထား လုပ်ဆောင်၏။ ရရှိလာသော အချက်များမှ တစ်ဖန်- ထိုသီအိုရီ (အဆို) သည် မှန်ကန်မှု မည်ရွေ့မည်မျှ ရှိမရှိ ဆိုသည်ကို Statistical Analysis များဖြင့်- စစ်ဆေး ဆန်းစစ်၏။ ထို့နောက်တွင်မှ- သိပ္ပံ သင်ခန်းစာများ အဖြစ် ဖြင့်- လက်ဆင့်ကမ်း ပို့ချကြ၏။
သိပ္ပံနည်းကျ နက္ခတ္တ၊ သိပ္ပံနည်းကျ လက္ခဏာဟု မိမိ လုပ်ဆောင်နေသော ဝေဒ ဂမ္ဘီရ ပညာများတွင်- အခြားသူက သိပ္ပံနည်းကျ ခေါင်းစဉ်တပ်၍- မိမိက လိုက်တပ် လိုက်ခြင်းလား၊ မိမိကိုယ်တိုင်ရော သိပ္ပံနည်းကျ လုပ်ဆောင် ပါသလား ဆိုသည်ကို ကိုယ်တိုင် စစ်ကြောစရာ ရှိ၏။
အကယ်၍- ၂၀၁၂-တွင် ငလျင် တစ်ခု လှုပ်သည် ဆိုပါအံ့- ကမ္ဘာကြီး ပျက်တော့မည်လား ဟု မစူးမစမ်း ထိပ်လန့် သင့်ပါသလား၊ ထိုသို့သော ငလျင်များသည် ယခင်ကရော မဖြစ်ခဲ့ဘူး ဘူးလား၊ ထိုစဉ်က ဘာကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ပါသနည်း စသဖြင့် ကြိုတင် လေ့လာထားမိသော်- မိမိ၏ ဆင်ခြင်မှု နှင့် ဆုံးဖြတ်မှုတို့သည် ဥာဏ်နှင့် ယှဉ်သော ဆင်ခြင် ဆုံးဖြတ်မှု ဟု ဆိုရမည် ဖြစ်၏။
သုတေသန ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍- “နက္ခတ်ဗေဒင် သုတေသီ” ဆောင်းပါး တွင် ဖေါ်ပြ ရေးခဲ့ဘူးသလို၊ အစွဲ အလမ်းများ နှင့် ပတ်သက်၍- “ယုံကြည်မှု၊ ကြောင်းကျိုးတရား နှင့် အစွန်းရောက်မှုများ။” ဆောင်းပါးတို့တွင် ဖေါ်ပြရေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါ၏။
မွေးရာပါ စိတ်တန်ခိုး စွမ်းအင်ကြောင့်- တစ်စုံ တစ်ခု ဖြစ်မည်ကို ကြိုသိ၍- ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပြောပြလိုက်သော အခါ- ထိုဖြစ်ရပ်ဆိုး ဖြစ်လာသော အခါ- ပြောသူအား “စုန်း” ဟု စွပ်စွဲ၍ ရပ်ရွာမှ နှင်ထုတ်ခြင်း၊ ဥရောပတိုက်တွင်- ၁၆-ရာစု အတွင်းတွင်- ထိုသို့ အကြားအမြင် စွမ်းအင်ရှိသူ မိန်းကလေးပေါင်း ၆၀၀ ခန့် အထိ- အရှင် လတ်လတ် မီးရှို့ သတ်ဖြတ်ခဲ့ ခြင်းများသည်- မလိုအပ်သော အစွဲ အလမ်းများ ကြောင့် ဖြစ်၏။ မြန်မာတွင်လည်း- “ပါးစပ်ပုပ် ကြီး၊ ပါးစပ် စီးတယ်” စသဖြင့်- အနိဋ္ဌ ဖြစ်ရပ်များကို ကြိုပြောသူတို့အား စွပ်စွဲခဲ့သော သာဓက များစွာ ရှိခဲ့ပါ၏။
စိတ်စွမ်း အင် ရှိသူ ဆိုသည် မှာလည်း- ဒိဗ္ဗစက္ခု၊ ဒိဗ္ဗသောတ အဘိညာဉ် ရသူမဟုတ်လေရာ- သူ့အာရုံတွင် ပေါ်ချင်လျှင် ပေါ်လာသော ကိစ္စကိုသာ ပြောပြ နိုင်ခြင်း ဖြစ်၍- အရာ အားလုံးကို သိသူမဟုတ်ရလေရာ- အများသူငါ၏ စွပ်စွဲချက်တို့ကို မဖြေရှင်း နိုင်တော့ပဲ- အစွပ်စွဲ ခံရခြင်း များသာ ရှိခဲ့ရရှာပါ၏။
အကြောင်းအရာ အနည်းငယ် ဘေးရောက်သွား၍- မူလ ရည်ရွယ်ချက်သို့ ပြန်လှည့်ကြပါဦးစို့။
သုတေသန လုပ်မည် ဆိုလျှင်- စုဆောင်းထားသော အချက်အလက် ကုန်ကြမ်းများ ပထမ ဦးစွာ ရှိရပါမည်။
မိမိလုပ်ဆောင်လိုသော ခေါင်းစဉ်ကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်၍- စနစ်ကျသော နည်းစနစ်များဖြင့် တွက်ချက် ဆန်းစစ်ပြီး- ဘက်စုံ ထောင့်စုံမှ အဖြေကို ရသော အခါမှသာ- ယခင်က မိမိသိထားခဲ့သော “အကြောင်းရင်း” ဆိုသော အရာသည် တကယ့် အကြောင်းရင်း ဖြစ်မဖြစ် သေချာပြီ ဖြစ်၏။
ကောင်းပါပြီ။ ယခု အခါ ဘာဖြစ်မည် ညာဖြစ်မည် စသည်ဖြင့် ဟောပြောကြတော့မည် ဆိုပါတော့- နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ၏ ကိစ္စ၊ ကမ္ဘာနှင့် ဆိုင်သော ကိစ္စများကို ဆန်းစစ် ဟောပြောသော နက္ခတ် ပညာကို နိုင်ငံရေး ဗေဒင် Mundane Astrology ဟု ခေါ်ပါသည်။
နိုင်ငံရေး ဗေဒင် နှင့် မိုးတား ၏ ရပ်တည်ချက်။
နိုင်ငံရေး ဗေဒင် ဆိုသည်မှာ
ပထမဦးစွာ နိုင်ငံရေး ဗေဒင် Mundane Astrology ဆိုသည်မှာ ဘာလဲ ဟု ကောင်းစွာ နားလည် ထားရန် လိုအပ်၏။ ရှေးယခင် အခါကတည်းက လာမည့် နှစ်တွင် မိုးသည်း မလား၊ မိုးခေါင် မလား၊ အစားအသောက် ရှားပါး မလား၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များ ရှိမည်လား စသည်တို့ကို တွက်ချက်သော နည်းများ ရှိ၏။
ထို့နောက်တွင်တော့- လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး အထိကရုဏ်များ ဖြစ်လာနိုင်စရာ ရှိမရှိ၊ မည့်သည့် တိုင်းပြည် ပျက်စီး နိုင်မှု၊ တိုင်းပြည်သစ် ပေါ်ပေါက်လာနိုင်မှု ရှိမရှိ၊ နိုင်ငံ့ ခေါင်းဆောင် များ၏ ကံကြမ္မာ အနေအထား စသည်တို့ကို ဆက်လက် လေ့လာကြ၏။ အင်္ဂလိပ်စာလုံး ဖြစ်သော Mundane သည် သက္ကရိုက် စကားဖြစ်သော Medini မှ ဆင်းသက်လာခြင်း ဖြစ်၏။
တိကျသော- နိုင်ငံရေး ဗေဒင် တစ်ခုကို လေ့လာမည် ဆိုလျှင်- အောက်ပါ အချက်အလက်များ လိုအပ်ပါသည်။
၁။ တိုင်းပြည် နိုင်ငံ၏ ဇာတာမှန်။
၂။ တိုင်းပြည် ခေါင်းဆောင်နှင့် အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း၏ ဇာတာ။
၃။ တနင်္ဂနွေ ဂြိုဟ် အနေဖြင့် မိဿ ရာသီ အစသို့ စတင်ဝင်ရောက်သော အနေအထားမှန်။
၄။ လတိုင်း၏- လပြည့်၊ လကွယ်၊ တိထီ အမှန် ကို ပြသော ဇယား။ ပုံမှန် ပြက္ခဒိန် မဟုတ်ပါ။
၅။ နိုင်ငံတို့တွင်- နေကြတ်၊ လကြတ် ဖြစ်နိုင်မည့် အနေအထားများကို တွက်ချက်၊ အဓိပ္ပါယ် ယူဆထားမှုများ။
၆။ တိုင်းပြည် နိုင်ငံအား လွှမ်းမိုးမည့် ကောဇာ ဂြိုဟ်သွား အနေအထားမှန်များ။ (ပုံမှန်တွက်ခြင်း အရ)။
၇။ တိုင်းပြည် နိုင်ငံအား လွှမ်းမိုးမည့် ကောဇာ ဂြိုဟ်သွား အနေအထားမှန်များ။ (အထူး ဇာတာခွင်များ အရ)။
၈။ ထူးခြားသော ဂြိုဟ်ပူး၊ ဂြိုဟ်မြင် တွက်ချက်ထားမှုများ။ ထူးခြားသော ကြယ်တံခွန် ပေါ်မည့် ကိစ္စများ။
၉။ မူလ နိုင်ငံ၏ ဇာတာ နှင့် နှစ်အရ ထပ်မံတွက်ထားသော ဇာတာခွင်များ။
၁၀။ နေရာ ဒေသ လတ္တီတွဒ်၊ လောင်ဂျီတွဒ်များ ထင်ရှားစွာ ပြထားသော တိုင်းပြည်၏ မြေပုံ။
သို့သော် ဇာတာ ဖြစ်နိုင်ချေ များစွာ ရှိသော -တိုင်းပြည် တစ်ခု အတွက် တိကျသော ဇာတာမှန်ကို ဖြစ်ရပ်များစွာကို လေ့လာပြီးမှ- မည်သည့် ဇာတာက တကယ် ပို၍ ထင်ရှားစွာ အလုပ်လုပ်နေသည်ကို လေ့လာခြင်း တစ်ခုကတည်း ကပင်- နိုင်ငံရေး ဗေဒင်ကို လေ့လာသူများ အတွက် စိန်ခေါ်မှု များစွာ ရှိနေပါ၏။
ဥပမာ- ၁၉၆၃၊ သြဂုတ်လ ၃၁-ရက်တွင် အင်္ဂလိပ် လက်အောက်မှ လွတ်လပ်ခဲ့သော စင်္ကာပူ နိုင်ငံတွင်၊ လူမျိုးရေး အထိကရိုဏ်း များကြောင့်- မလေးရှား အုပ်ချုပ်မှု အောက်သို့ ပြန်လည် ထားခဲ့ရပြီး၊ ၁၉၆၅၊ သြဂုတ်လ ၉-ရက် တွင်မှ ကိုယ်ပိုင် ခွဲထွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် မည်သည့် ဇာတာကို အမှန် ယူမည်နည်း။ ထိုနည်းတူ ပြည်နယ် များစွာကို စုပေါင်း ဖွဲ့စည်းထားသော အမေရိကန် နိုင်ငံတွင် ဖြစ်နိုင်ချေ ဇာတာပေါင်း များစွာ အနက်မှ မည်သည့် ဇာတာကို အမှန် ယူမည်နည်း စသည်တို့မှာ- ပြီးခဲ့သော ဖြစ်ရပ်များစွာကို ပြန်လည် စစ်ဆေးပြီး၊ မှ အမှန်တကယ် ထင်ရှားစွာ အလုပ်လုပ်နေသော ဇာတာသည်သာ ဇာတာမှန် ဖြစ်ကြောင်းကို အတည်ပြုရမည် ဖြစ်၏။
၁၉၄၈-ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ် လက်အောက်မှ လွတ်လပ်ခဲ့သော မြန်မာ နိုင်ငံ ဇာတာ အတွက်တွင်ပင်- မြန်မာ ပညာရှင် တို့ ယူဆ ထားသည်က- အလံတင် အလံချ အခမ်း အနား အတွက် မင်္ဂလာ အခါ အဖြစ်- ရွေးချယ် ထားခဲ့ကြသော အချိန် နံနက် ၄း၂၀ ကို မွေးချိန် အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြ၏။
မိုးတားသည် မြန်မာ နိုင်ငံအား အင်္ဂလိပ် အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တယားကြီး ရပ်ဆိုင်း သွားသော အချိန်- တစ်နည်းအားဖြင့်- မြန်မာ နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ကြေညာ စာတမ်း အက် ဥပဒေ အရ- ဇန်န၀ါရီလ ၄-ရက်သို့ ရောက် ရောက်ချင်း အချိန်ကို မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ဇာတာ အဖြစ် ယူဆပါ၏။ ဤဆောင်းပါးတွင်- ဇာတာ ၂-မျိုးကို ယှဉ်တွဲ နှိုင်းယှဉ် ဖေါ်ပြ ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
မည်သည်က ပိုမှန်သည် ပိုမှားသည်ကို ငြင်းနေခြင်း မဟုတ်ပါ။ အချက်အလက် မျိုးစုံ ထောင့်စုံ ဖြင့် ယှဉ်တွဲ ဖေါ်ပြပေးမည် ဖြစ်သဖြင့်- နက္ခတ် ပညာကို စိတ်ဝင်စားသော သုတေသီများ အတွက် အကျိုးရှိစေရန်သာ ရည်ရွယ် ပါသည်။ အကယ်၍ ဤဆောင်းပါး တွင် ဖေါ်ပြချက်များကို လက်မခံပဲ မိမိ သုံးစွဲနေကြ အတိုင်း သုံးစွဲ လိုပါကလည်း- ပညာရှင်တို့၏ သဘောသာ ဖြစ်၍- စာရေးသူ အနေဖြင့် အငြင်းပွားဘွယ် မရှိပါ။
နိုင်ငံရေး ဗေဒင် တွင် သုံးစွဲသော ဂြိုဟ်နှင့် ဘာဝ တို့၏ ပရိယာယ်များ။
၀ါရဟ မိဟိရ ဆရာသခင် လက်ထက်ကပင် အသုံးပြုခဲ့သော နိုင်ငံရေး ဗေဒင်ကို သုံးစွဲရာတွင်- အနောက်တိုင်းမူများတွင် သုံးစွဲသော- ယူရေးနပ်စ်၊ နက်ပကျွန်း၊ ပလူတို ဂြိုဟ်များကိစ္စကို လောလောဆယ် ချန်လှပ်ထားပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော်- အခြားမူများ နှင့် ဆွဲနှောပြီး- လိုသလို- သုံးသပ်သော အနေ အထား ရောက်သွားနိုင်သဖြင့် ဖြစ်သည်။
ဆက်လက်၍ ရှင်းပြလိုသည်က- နိုင်ငံရေး ဗေဒင်ကို အသုံးချခြင်း ပိုင်း ဆိုင်ရာ ကိစ္စ ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံရေး ဗေဒင်ကို အသုံးချသူများ။
ဗေဒင် ပညာသည် လူသားတို့ အကျိုးအတွက်- ရှေးသူတော်စင် ကြီးများက လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့သည် မှန်သော်လည်း- လူတို့သည် မိမိတို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အမည် ထင်ရှားကျော်ကြားရေး အတွက် သော်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုက မိမိ၏ ရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်စေရန် ၀ါဒဖြန့် လက်နက် အဖြစ်ဖြင့် သော်လည်းကောင်း နိုင်ငံရေး ဗေဒင်ကို အသုံးချခဲ့ကြ၏။ အသုံးလည်း ချနေကြ၏။ လူတို့၏ လောဘ၊ ဒေါသ၊ အတ္တနှင့် မာန တရားတို့ မပျောက်ဆုံးသေး သရွေ့ နောင်လည်း ဆက်လက် အသုံးချကြဦးမည်သာ ဖြစ်၏။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အမည် ထင်ရှားကျော်ကြားရေး အတွက် နိုင်ငံရေး ဗေဒင်သည် အထိရောက်ဆုံး ကိရိယာ ဖြစ်၏။ မည်သူ အာဏာရမည်။ မည်သည့် ခေါင်းဆောင် အသေဆိုးဖြင့် သေဆုံးမည် စသည်ဖြင့် ရဲရဲ ဟောချပြီး- မှန်သွားပါက- အမြန်ဆုံး နာမည်ကျော် လူသိများသော အနေအထားသို့ ရောက်နိုင်၏။
အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုအတွက် အသုံးချသော အနေအထားများသည်- မြန်မာများ သိရှိထားသော ကိစ္စများသာမက- မြန်မာ အများစု သိပ်မသိကြသော ဖြစ်ရပ် တစ်ခုကိုပါ လက်ဆင့်ကမ်း လိုပါသည်။
အမေရိကန် ဗီယက်နာမ် စစ်ပွဲ ကာလ များတွင်- ဗေဒင် ယုံကြသော ဗီယက်နာမ် လူမျိုးများအား နက္ခတ်ဗေဒင်ကို အသုံးပြု၍- ယခု စီအိုင်အေ ၏ ကနဦး အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ခဲ့သော အို၊အက်စ်၊အက်စ် မှ ၀ါဒ ဖြန့် သိမ်းသွင်းမှု ပြုခဲ့ပါ၏။ လုပ်ပုံမှာ- ဗီယက်နာမ် တွင် သင်္ကြန်စာ ဟောကိန်းကဲ့သို့ နှစ်တိုင်း ဟောကိန်း ထုတ်နေသော နာမည်ကြီး- ဗေဒင် ဆရာများကို အသုံးချ၍- ဟောကိန်း များ ထုတ်ပြန် ဖြန့်ဝေရာတွင်- မြောက်ဗီယက်နာမ် ခေါင်းဆောင် ဟိုချီမင်း မည်သို့ အသေဆိုးဖြင့် သေမည်။ အခြားသော မြောက်ဗီယက်နာမ် ခေါင်းဆောင်များ အချင်းချင်း- သတ်ပွဲ ဖြတ်ပွဲများ ပေါ်ပေါက်မည်။ မည်သို့ သေဆုံးကြမည်။ မြောက်ဗီယက်နာမ် ဘက်တွင် ငတ်မွတ် ခေါင်းပါးခြင်း၊ ရာသီဥတု ဖေါက်ပြန်ခြင်း၊ ရောဂါ ကပ်ဆိုးများ ကျရောက် ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်မည် စသည်ဖြင့်- မြောက်ဗီယက်နာမ် ဘက်မှ ပြည်သူများကို တောင်ဗီယက်နာမ် သို့ ပြောင်းရွှေ့လာစေရန် နှင့် မြောက်ဗီယက် နာမ် လူမျိုးများ သူတို့ ခေါင်းဆောင်များ အပေါ်တွင် အားကိုးမှုများ ပျက်ပြားစေရန် ကြံဆောင် ခဲ့ကြပါသည်။
မိုးတား ၏ ရပ်တည်ချက်
မိမိသိသော အသိ၊ တတ်သော အတတ်ဟူသည် လူသားတို့ အကျိုးအတွက်သာ ဖြစ်ရမည်ကို ပညာရှိ သူတော်ကောင်း တို့က ဆိုဆုံးမခဲ့၏။
အတတ်နှင့် ပညာ ဆောင်းပါးတွင်- ကျားသေကို အသက်သွင်းနိုင်သော သော မန္တန်ကို တတ်သူ၊ ရတနာမိုး ရွာစေတတ်သော မန္တန်ကို တတ်သူ၊ တိရစ္ဆာန် တို့အား အမိန့်ပေး ခိုင်းစေနိုင်သော ပထ၀ီ ဇယ မန္တန်ကို တတ်သွားသူ မြေခွေးတို့၏ အကြောင်း နှင့် သူတို့ - သူတို့နှင့် တွဲဘက်မိသူများ၏ ဘ၀ ဇတ်သိမ်း ကို ဖေါ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်၏။
နောက်ဆက်တွဲ ကိစ္စများကို ဆင်ခြင်ခြင်း မရှိပဲ- မိမိ၏ အစွမ်းကို ပြသခြင်းကြောင့်- အများတကာ နှင့် တကွ မိမိဘ၀ ဇာတ်သိမ်းပါ မကောင်းခြင်း တို့ကို မြတ်စွာဘုရားက သုတ္တန် ပါဠိတော် တို့ဖြင့် ဟောကြား ညွှန်ပြပေးခဲ့၏။ တစ်ဆက်တည်း တွင် မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် စကား ၆-ခွန်း ကိုဖေါ်ပြ၍- ပြောအပ်သော စကားဟူ၍- ၂-မျိုးသာ ရှိကြောင်း ကိုလည်း ဟောကြားတော်မူသွား၏။
၁။ ဟုတ်လည်းမဟုတ်မှန်၊ သူလည်းမနာလို၊ အကျိုးမရှိစကား။
၂။ ဟုတ်မှန်၏၊ သူကားမနာလို၊ အကျိုးမရှိစကား။
၃။ မဟုတ်မှန်၊ အကျိုးမရှိ၊ သူကနာလို၏။
၄။ ဟုတ်မှန်၏၊ နာလို၏၊ အကျိုးမရှိ။
၅။ ဟုတ်မှန်၏၊ အကျိုးရှိ၏၊ သူကား မနာလို။
၆။ ဟုတ်မှန် ၏၊ အကျိုးရှိ၏၊ သူလည်း နာလို၏။
ဟုတ်မှန်ပြီး၊ အကျိုးရှိသော စကားကိုသာ- တစ်ဘက်သူ နာလို၊ မနာလိုသည့် အနေအထားတွင်- ကာလ ဒေသ အခြေအနေ ကို ကြည့်၍ ပြောအပ် ကြောင်း ဟောကြားတော်မူသွား၏။
အကယ်၍ မိမိတွက်ချက် ခန့်မှန်း သိရှိသော - ရှေ့ဖြစ်တို့ကို ဟုတ်မှန်မည် ဟု ယုံကြည်ပါလျှင်- အများတကာ အား ထိတ်လန့် ချောက်ခြားစေသော အဟောမျိုးကို ဟောပြောမည့် အစား- မိမိကိုယ်တိုင်- အနိုင်ရမည့် အချိန်ကို တွက်ချက်ပြီး- တစ်စုံ တစ်ခုသော အလောင်း အစား တစ်ခုတွင် မိမိ၏ ချမ်းသာ သမျှကို ပုံအော၍ စမ်းသပ် ကြည့်ပါလေ။
သို့မဟုတ်ပါ ကလည်း- မိမိသေဆုံးမည်ကို တွက်ချက်၍ သေခြင်းက မိမိထံသို့ မလာခင်- မိမိအနေဖြင့် သေခြင်းဆီသို့ သွားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော အိန္ဒိယမှ ဗေဒင်ဆရာ တစ်ဦးဖြစ်သူ K. Parthasarathy အကြောင်းကို ဖေါ်ပြပါ ဆိုက် http://www.aghilham.com/0501/astrologyproof.html တွင် လေ့လာ နိုင်ပါသည်။
တစ်ဖန်- အကျိုးရှိမည် မရှိမည်ကို ဆက်ကြည့်ပါစို့။ မှန်မည်ကို သေချာစွာ သိရှိပြီး သော်မှ- မကောင်းသော ကိစ္စများကို အများအား ပြောခြင်းဖြင့်- အများတွင် အကျိုးရှိပါ မည်လား။ ကြောက်လန့် စိုးရိမ် စိတ်ဆင်းရဲခြင်း၊ ကုန်ဈေးနှုန်းများ ကြီးမြင့်သွားခြင်း စသော မလိုအပ်သော ပြဿနာများကိုသာ အဆစ် အဖြစ်ရမည် ဖြစ်၏။
အကောင်းဘက်မှ အချက်အလက်များကို ပြောပြသော်- အများအနေဖြင့် စိတ်ချမ်းသာ၏။ အေးချမ်း၏။ သို့သော်လည်း အကျိုးမရှိပါချေ။ ထို့ကြောင့်- မှန် မမှန် ကိစ္စနှင့် အကျိုးရှိ မရှိ ကိစ္စများတွင်- ဘုရားဟော နှင့် မညီသည်ကို တွေ့ရပါ၏။
သို့သော်လည်း- လူအများတို့သည်- ကမ္ဘာကြီး ဘာဖြစ်မလဲ၊ မြန်မာပြည် ဘာဖြစ်မလဲ စသည် တို့ကို သိလို၊ ကြားနာ လို၏။ သို့သော်- အထက်ပါ အချက် များနှင့်ပင်- မပြောသင့်သော စကားကြီး ၄-ခွန်းတွင် ပါဝင်နေပြီ ဖြစ်၏။
ထို့ကြောင့်- မြန်မာပြည် အနေဖြင့်- ဘာဖြစ်မည်၊ ညာဖြစ်မည်၊ ဘယ်သို့၊ ဘယ်လို စသည်တို့ကို မိုးတား အနေဖြင့် မည်သည့် အခါတွင် ပြောဆို ဟောကြားခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းပြည် ခေါင်းဆောင်များထံ အကြံပြုချက်များ ပေးပို့ခြင်း တို့ကို မည်သည့် အခါတွင်မှ ပြုလုပ်မည် မဟုတ်ပါ။ မိမိ အနေဖြင့် ထုတ်ဖေါ် မပြောသဖြင့်- ဝေဘန် ကဲ့ရဲ့ပါကလည်း- ဝေဘန် ကဲ့ရဲ့ နိုင်ကြပါသည်။
တိုက်ဆိုင် မှန်ကန် သွားပြီး နာမည် ကြီးမှုကိုလည်း မိုးတား အနေဖြင့် မလိုအပ်ပါ။ မိမိ၏ ပယောဂ ကြောင့်- အများတကာ စိတ်ဒုက္ခ ရောက်ချင်း မဖြစ်စေရန်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်- အခြားသူများ ကစားနေကြသော ကစားပွဲတွင်- ဘုမသိ ဘမသိ ဘေးဝင်ပြောခြင်းဖြင့်- အချို့သော သူများ၏ အသုံးချခံ အနေအထား သို့လည်း မရောက်လိုပါ။
သို့သော်- မိုးတား နက္ခတ် နည်းဖြင့် ဆန်းစစ်ဝေဘန် မှုများကို လေ့လာပြီးနောက်- ဆရာစွဲ၊ ဂိုဏ်းဂဏ စွဲ၊ ကျမ်းစွဲ မရှိပဲ- ယထာဘူတ ကျကျ နက္ခတ် ပညာကို လေ့လာ သူများ အနေဖြင့် မူ- ပြီးခဲ့သော ဖြစ်ရပ်များကို ဆန်းစစ်ထားသည့် အချက်အလက်များမှ တစ်ဆင့် နောင် ဖြစ်လာ နိုင်စရာ အနေအထား များကို သိရှိနိုင်ခြင်း၊ စနစ်တကျ သုတေသန ဆန်းစစ်သည့် ပုံစံများကို အတုယူ ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင် လာကြခြင်းဖြင့်- မြန်မာပြည်တွင် နက္ခတ် သုတေသီ စစ်စစ်များ ပေါ်ထွန်း လာနိုင်ခြင်း တို့ကို ရည်ရွယ်၍ သာ ဤဆောင်းပါးကို ရေးသားရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
လွတ်လပ်ရေး မရခင် နှင့် လွတ်လပ်ရေး ရပြီးကာစ ကာလများတွင်- သတင်းစာများတွင်- နိုင်ငံရေး ဟောကိန်းများ အပြိုင်အဆိုင် ဟောပြောကြယင်း- မိတ်ဆွေ မှ ရန်သူ ဖြစ်သွားကြသော ဆရာကြီးများ အကြောင်းတို့ကိုလည်း- စာဖတ်သူသည် မြန်မာ့ ဗေဒင် သမိုင်းကြောင်းကို လက်လှမ်းမီသူ ဖြစ်ပါက သိရှိနိုင်ပါသေး၏။
ဆက်လက် တင်ပြလိုသည်က- ကျင့်ဝတ် သိက္ခာပိုင်း ဖြစ်၏။ လူသား တို့နှင့် လူသားတို့ ကျင့်ဝတ် ရှိသလို၊ မိဘ ဖြစ်လျှင် မိဘ ကျင့်ဝတ်၊ ဆရာ ဖြစ်လျှင် ဆရာကျင့်ဝတ်၊ စသည်ဖြင့် ရှိ၏။ ထိုကျင့်ဝတ် သိက္ခာတို့ကို မုန်းတီးသူများသည် မြတ်စွာဘုရားရှင် လက်ထက်တော်ကပင် ရှိခဲ့၍- မြတ်စွာဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန် ပြုတော်မူ သော်အခါ- ထိုရဟန်းကြီး ၄၀-တို့သည် “ငါတို့ကို ဟိုဟာ မလုပ်နဲ့၊ ဒီဟာမလုပ်နဲ့ ပြောတဲ့ ရဟန်းကြီး ဂေါတမ မရှိတော့ဘူး။ အခုဆိုလျှင် လုပ်ချင်သလို လုပ်လို့ ရပြီ” ဟု ပြောနေကြသည် ကို ကြားရသဖြင့်- ရှင်မဟာကဿပ မထေရ်မြတ်သည်- ပထမဆုံး သင်္ဂါယနာ လိုအပ်ကြောင်းကို နားလည် သိမြင်ခဲ့ရ၏။
အကြီးအမှူး လုပ်သူသည် နာယက ကျင့်ဝတ် နှင့် ညီရသလို၊ တပ်မတော်သားတို့သည် လည်း တပ်မတော်သား အဓိဋ္ဌာန် နှင့် ကျင့်ဝတ် ဆောင်ပုဒ်တို့ကို လိုက်နာ ရမည် ဖြစ်သကဲ့သို့၊ ဆရာဝန်များသည်လည်း ဆေးပညာ သင်ယူစဉ်က ဆိုခဲ့ရသော သစ္စာများ ရှိကြရ၏။ ဗေဒင် ဆရာ ဟူသည်လည်း- နိုင်ငံသား ဖြစ်ပါက နိုင်ငံသား ကျင့်ဝတ် ကို လိုက်နာ ရမည် ဖြစ်သကဲ့သို့၊ ဗေဒင် ပညာကို သုံးစွဲသဖြင့် ဝေဒ ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာကြရ၏။ ဝေဒကျင့်ဝတ် ဟူသည် မည်သည်များ ဖြစ်သည်ကို- ဗေဒင် စာအုပ် ဖတ်ရုံမျှ ဖြင့် သိနားလည် ရန် မဖြစ်ပါ။ မိမိကိုယ်တိုင် ထိမ်းသိမ်း စောင့်စည်းမှု ကလည်း အရေးကြီးသဖြင့်- မိုးတား အသင်း၏ အဓိက စည်းမျဉ်းများတွင်- မိမိ၏ ဟောဆိုချက်သည် မည်သူ့ကိုမျှ မထိခိုက်စေရ ဆိုသော အချက်ကို ဖေါ်ပြထား၏။
ဤမျှ ဆိုလျှင်- အဘယ့်ကြောင့် မိုးတား အနေဖြင့်- မြန်မာနိုင်ငံ တွင်- မည်သူ အာဏာ ရမည်- မည်သည့် ခေါင်းဆောင် များ မည်သို့ မည်ပုံ ဖြစ်မည်၊ မည်သည့် ဖြစ်ရပ်ကြီးများ ဖြစ်မည် စသဖြင့်- ခြောက်လှန့်- မြှောက်ဖား - နိမိတ် လမ်းကြောင်းပြ ရှေ့ရေး တို့ကို မဟောပြောပဲ- ဖြစ်လာနိုင်သည့်- လမ်းကြောင်း Road Map အနေဖြင့်သာ- အသိပေး ရခြင်း ဖြစ်သည့် အချက်ကို စာဖတ်သူတို့ အနေဖြင့် လက်ခံမည် ယူဆ ပါသည်။
(အပိုင်း (၂) ကို အမြန်ဆုံး တင်ပြပေးပါမည်။)
MOTAA English Blog
အင်္ဂလိပ် ဘာသာနှင့် အခြား ဘာသာများသို့ ပြောင်းလဲ ဖတ်ရှု နိုင်သည့် မိုးတား ဘလော့ http://numan-motaa-sg.blogspot.sg/
Subscribe Now: MOTAA
To See Myanmar Font
Copyright License of MOTAA
MOTAA Astrology Articles by Numan is licensed underaCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Based onawork at motaa.info.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://motaa.info/.
မိုးတား နက္ခတ္တဆိုင်ရာ ကြေညာချက်များ
1. အကြံပေးလုပ်ငန်း အချို့ရပ်တန့်ထားခြင်း။
1. MOTAA မိုးတားပညာရပ် ဆိုသည်မှာ
10. မြန်မာ့သမိုင်းနှင့် နက္ခတ်ပညာ ကဏ္ဍ (၂) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ ဇာတာ
11.စုလျား ရစ်ပါတ် ထိမ်းမြားတဲ့ မင်္ဂလာ (၁)
12.စစ် ဧကရာဇ် နပိုလီယံ နှင့် ဗေဒင်ပညာ
2. MOTAA Basic Concept
3. နက္ခတ်ဗေဒင် သုတေသီဆိုသည်မှာ
4. ဥပစ္ဆေဒက ကံ နှင့် ဝေဒပညာ
5. ဗေဒင်ပညာ၊ ယတြာနှင့် ကံ-ကံ၏ အကျိုး
6. မြန်မာ့သမိုင်းနှင့် နက္ခတ္တပညာ
7. ထီပေါက်သူတစ်ဦး၏ ဇာတာ
8. ဂြိုဟ်ဆိုး ဂြိုဟ်ကောင်း၊ လူဆိုး လူကောင်း
A- မြန်မာပြည်တွင် ရောင်းအကောင်းဆုံး နံပါတ် (၃) (စာပေလောက စစ်တမ်းအရ)
အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နှစ် ၃၀၀ ပြက္ခဒိန်
မြန်မာ- အင်္ဂလိပ် ပြက္ခဒိန် (နှစ် ၃၀၀)
၉. မမှန်ယင် လျှာလှီးခံမယ့် ထီတွက်နည်း။
အမေရိကန် လွတ်လပ်ရေး ဘခင် ဘင်ဂျမင် ဖရန်ကလင်။ (အပိုင်း ၁)
မွေးနှစ် အလိုက် ဟောဆိုသော နက္ခတ်ပညာ
မမှန်ယင် လျှာလှီးခံမယ့် ထီတွက်နည်း။
မြန်မာ့သမိုင်းနှင့် နက္ခတ်ပညာ ကဏ္ဍ (၂) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ ဇာတာ
မြန်မာ အန်ဒရွိုက် မိုးတား ဇာတာဖွဲ့ ပရိုဂရမ်။
မြန်မာ့ ကံကြမ္မာ (နှစ် ၁၀၀) အပိုင်း (၁)
စုလျား ရစ်ပါတ် ထိမ်းမြားတဲ့ မင်္ဂလာ (၁)
Astrology Remedy & Karma (ဗေဒင် ယတြာနှင့် ကံ၊ ကံ၏ အကျိုး)
ထီထိုးချင် သပဆိုယင်..(၂၀၁၁ နှစ်သစ် လက်ဆောင်)
သိန်းရာချီ ထီဆုကြီးပေါက်သူ မြန်မာ တစ်ဦး၏ ဇာတာ။
1. MOTAA နက္ခတ္တဝေဒ သင်ခန်းစာများ
2. MOTAA အသင်းဝင် အဖြစ်လျှောက်ထားခြင်း
3. MOTAA Yahoo Group Help
4. MOTAA Google Group Help
5. MOTAA Discussion
Research Articles (သုတေသန ဆောင်းပါးအချို.)
Bill Gate (သူဌေးကြီး ဘီလ်ဂိတ်)
MOTAA Basic (မိုးတား အခြေခံ)
Benazir Bhutto (ပါကစ္စတန် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဘနာဇီယ...
Princess Diana (ဝေလမင်းသမီး ဒိုင်ယာနာ)
ဂဠုန် ဦးစော၏ ဇာတာအား လေ့လာခြင်း (U Saw)
U.S President John F. Kennedy
MOTAA Lessons (မိုးတား နက္ခတ်သင်ခန်းစာများ)
CANNOT SEE MYANMAR FONT- USE THIS!
ကြည့်သွားကြသော စာမျက်နှာ အကြိမ်ပေါင်း
၂၀၁၂-နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ သုတေသန။ အပိုင်း (...
မိတ်ဆွေ ဗေဒင် ဘလော့ဂ်များ
ကိုရမ်းဂမ်း (ဗေဒင် ဆိုက်)
IDM 26 build 14.full
ဖုန်းရွှေ ပညာ ဘလော့ဂ်
မြန်မာ တားရိုး (MM Tarot)
မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် (MMASTROLOGY)
မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် (မဟာဘုတ်)
အခြားသော မြန်မာ ဘလော့ဂ်များ
ဦးဝင်းမြင့် နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ဗိုလ်ချုပ် မှုးကြီး ဟောင်းသန်းရွှေ အားတွေ့ခွင့်တောင်းခံ ထား
KYAW CHAN NYEIN
MMAstronomy (အာကာသနက္ခတ် ပညာ)
နေစကြာဝဠာရဲ့ မူလ ဇာတိ။
Myanmar Online News Reader အကောင်းဆုံးမြန်မာဝက်ဆိုက်များဆုံစည်းရာ
Students Sponsorship Program
ခိုင်ထူးသစ် ရဲ့ စာဥယျာဉ်
ကမ္ဘာကြီးကိုခိုးမယ့်လူ (၂၀၀၄- မြားနတ်မောင်မဂ္ဂဇင်း)
ဖတ်ခဲ့ ကြည့်ခဲ့ဘူးသော အကြောင်းအရာများ
NUCC ညီလာခံ ထောကျခံသညျဆိုကာ သာကတေ အမှတျ(၂)ရဲစခနျးကို ဗုံးသီးဖွငျ့ ပဈ၍ တိုကျခိုကျ
သင်ခန်းစာနှင့် အထောက်အကူ များအတွက် MOTAA Discussion သို့သွားလည်ရန်။
About Numan (MOTAA)
Singapore/ Myanmar, Singapore/ Myanmar, Singapore
နျူမာန် သည် အိန္ဒိယ၊ အရှေ.တိုင်း၊ အနောက်တိုင်း နက္ခတ္တ၊ လက္ခဏာ ပညာ၊ နှင့် အခြားသော ဝေဒ၊ ဂမ္ဘီရ ပညာ တို.ကို လေ့လာခဲ့ ပြီး ဇာတာ ပေါင်း ၃-သောင်း ကျော် ကို သုတေသန ပြုခဲ့ သူဖြစ်သည်။ - (MOTAA) စနစ်ကို ဖေါ်ထုတ်၍- နိုင်ငံတကာ- ပညာရှင်များနှင့် ဆွေးနွေး ဖလှယ်မှုများ ပြုလုပ်လျှက်- ပညာရှင် ပြိုင်ပွဲများ ၀င်ရောက်ခဲ့ရာတွင်- -၂၀၀၈-ခုနှစ်၊ ဇွန်လ တွင် ကျင်းပသော သြစတြေးလျ နိုင်ငံမှ ကမ္ဘာကျော် အငြိမ်းစား နက္ခတ္တပညာရှင် ဒိုင်မောက် ကြီးမှူး ကျင်းပ သည့်- အရှေ.တိုင်း ဟိန္ဒူ နက္ခတ်နည်း၊ အနောက်တိုင်း နက္ခတ်နည်း-ကြိုက်ရာ ကို အသုံးပြု၍ အဖြေနှင့်တကွ ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းချက်များပါ ယှဉ်ပြိုင် မှုပြုရ သော- နိုင်ငံတကာ နက္ခတ္တ ဝေဒ ပညာရပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှု ပြိုင်ပွဲတွင် ထိပ်ဆုံး ပညာရှင် (၇) ယောက် အနက် တစ်ယောက် အဖြစ် - နောက်တစ်ကြိမ် - ၂၀၀၈-ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် - ကျင်းပသော စစ်ဆေးမှုတွင် ထပ်မံ၍ အတော်ဆုံး ပညာရှင် (၁၂) ဦးတွင် တစ်ဦး ပါဝင်ပြန်သည်။ - တစ်ဖန် ၂၀၀၈-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ တွင်ပါ- နိုင်ငံတကာ ဆိုင်ရာ- နက္ခတ်ပညာရှင် ထိပ်ဆုံး စာရင်း ၀င် (၈) ဦး တွင် ထပ်မံ ပါရှိခြင်းကြောင့် အိန္ဒိယ နိုင်ငံရှိ ပညာရှင် များက ဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊ ခံရသော Esteem Member အဖြစ် နိုင်ငံတကာ ဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှု များ ရရှိခြဲ့ ပီး၊ မြန်မာ့ ပညာကို ကမ္ဘာ သိအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
Standard Reading & Important Suggestion for 1 Year$100.00 SGD Standard Reading & Important Suggestion for3Year$250.00 SGD Selection Good time for Business$300.00 SGD Selection Good time for Marriage$150.00 SGD MOTAA Exam Fee for Level 1$15.00 SGD MOTAA Exam Fee for Level 2$20.00 SGD MOTAA Exam Fee for Level 3$50.00 SGD